History ဖြင့် ဇာတ်ကား92 ကား
Bodyguards and Assaddins (2009)
ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တရုတ်သမိုင်းကားတစ်ကား တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက သာမညဇာတ်ကားတစ်ကား မဟုတ်ပါဘူး တရုတ်ပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းတင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ, ဒေါက်တာအတွေးခေါ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဆန်း(Dr.Sun Wen) ကိုအခြေပြု ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒေါက်တာဆန်း တစ်ယောက် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ ဂျပန်ကနေ ဟောင်ကောင်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူခရီးထွက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြိုကွဲနေတဲ့ ဂိုဏ်းဃန တွေကို ပြည်လည်စည်းရုံးပြီး Qing မျိုးဆက်ကို အမျိုးဖြုတ်ဖို့ပါ။ ဒီထဲမှာ China Daily သတင်းစာတိုက်ကလည်း ကုလားကာနောက်ကွယ်ကနေပံ့ပိုးနေခဲ့တာပါ။ ဒေါက်တာဆန်း ရဲ့ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်ကရော ချောမွေ့ပါ့မလား သတင်းစာတိုတ်ကလည်း ဘယ်လိုမျိုး နောက်ကွယ်ကနေဘယ်လိုအထောက်ပံ့တွေပေးမှာလဲ လူတစ်ယောက်ကရော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကောင်းစားရေးအတွက် ဘယ်လောက်ထိ စွန့်လွှတ်ရမှာလဲဆိုတာ ဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှု့ကြပါရန်…။
IMDB Rating 6.8 ရရှိထားတဲ့ Colette ဆိုတဲ့ ၂၀၁၈ ထွက်ရုပ်ရှင်ကားလေးကတော့ ပြင်သစ် mime အနုပညာရှင်၊ ပြဇာတ်မင်းသမီး၊ ဂျာနယ်လစ်၊ နိုဘယ်ဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင် စာရေးဆရာမ Sidonie-Gabrielle Colette ရဲ့ အစောပိုင်းဘဝအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အဓိက ဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့တော့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ Keira Knightley က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ကျေးတောသူလေးတစ်ယောက် မြို့ကြီးပြကြီးမှာ မဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ အနုပညာကိုအမြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ အနုပညာသမားတွေ၊ အဲဒီနှစ်တွေက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နိမ့်ကျမှုတွေ ကြားက Sidonie-Gabrielle Colette ရဲ့ ဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ ပုံစံကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ လိင်တူချင်း ချစ်ကြိုက်တာကို ရှုံချတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲက လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့လည်း Colette သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ R Rated ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားနဲ့တော့မဆိုင်ပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Movie Quote လေးကတော့ “သမိုင်းဆိုတာ အဲဒီသမိုင်းကိုရေးတဲ့ ကလောင်ကိုင်သူလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်” ဆိုတာပါပဲ။
1984ခုနှစ်ကျော်ကာလက ရောဂါဆန်းတွေ ကမ္ဘာကြီးထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင် ရောက်ရှိလာသည့် နှစ်ကာလတွေဟု ပြောရမည်။အမေရိကလို အထူးလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သည့် လူတန်းစားတွေကြားမှာ လူတွေပဲ သတ်မှတ်ထားသည့် ကောင်းမှု ။မကောင်းမှု တွေအား အလွယ်တကူ ရရှိခံစားနိုင်သော အချိန်ကာလမှာ အေ့အိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကို ဖြစ်စေသည့် အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ဗိုင်းစ်ရပ်ပိုးကလေးတွေကလည်း လူသားတွေကြားကို တိုးဝင်ရောက်ရှိလာသည်။ ယခုနှစ်ကာလများသည် အေအိုင်ဒီအက်စ် ခေတ်ဦးလို့ ဆိုရမည်။လူတန်းစားအကြား ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာ ဆေးသိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အထူးခေါင်းခဲရသော အချိန်ကာလများဖြစ်နိုင်သည်။လိင် အပျော်အပါး။မူးယစ်ဆေးဝါးစတဲ့ စိတ်လွတ်လပ်မှု ကို အထောက်အကူပြု သော ယင်းအချက်အလက်များနှင့် လွတ်ကင်းနိုင်ဖွယ်မရှိသည့် လူတန်းစားတွေကြားကို ချက်ချင်းပျံ့နှံ့လာသည်။ထဲထဲဝင်ဝင် ထိန်းချု ပ်တားဆီးလို့ရမည့် ဆေးတွေလည်း မရှိသေး။လူတွေလည်း တစ်ဖြု တ်ဖြုတ်သေကုန်သည်။ဆေးရုံအများစုတွင်လည်း အိတ်ချ်အိုင်ဗီကနေ အေ့စ်အဆင့်ဖြစ်နေသည့် လူနာတွေနှင့်ပြည့်လို့နေသည်။ သို့ဖြစ်စေကာမူ လူထုအကြားဝယ် ပညာပေးနှိုးဆော်မှု နှင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်သော အကြောင်းရင်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်ကာကွယ်ရမည့် အချက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပညာပေးချိန်မရှိသေးတဲ့အချိန်မျို းမှာ အပျော်အပါးခုံမင်သည့် ရွန်လို လူတစ်ယောက်မှာလည်း အိတ်ချ်ဗွီစက်ကွင်းက မလွတ်မြောက်ခဲ့။သူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက တိုးဝင်ရောက်ရှိနေပုံရသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် သူ၏ ခုခံအားကာကွယ်မှု နည်းစနစ်ကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက တိုက်ဖျက်အောင်နိုင်ခဲ့ပြီလဲ မသိနိုင်။ကနဦးကမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နည်းပြီး ပေပေတေတေနေလေ့ရှိသူဖြစ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ထောက်ကန်မပေးနိုင်ရှာတော့။ ရွန် တစ်ယောက် ဆေးရုံရောက်သွားသည်။ဆေးရုံရောက်တော့ ဆရာဝန်ပြောကြားချက်အရ သူမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြစ်နေပြီတဲ့။သူမကြာခင်သေရတော့မှာလို့ ဆရာဝန်ကပြောသည်။အလွန်ဆုံးခံရင် ရက်သုံးဆယ်ပဲတဲ့။မိမိ၏ သေဆုံးရမည့် ရက်စွဲအတိအကျကို ပြောပြသတ်မှတ်တာမျို းကြုံ ရချိန်မှာ ဘယ်လိုလူသားမျိုးက ပြုံ းပြုံ းကလေးနှင့် ခေါင်းညိတ်လက်ခံနိုင်မှာလဲ။သူမယုံ။ဆရာဝန်တွေကို အော်ဆဲသည်။ သူ့မှာ ဒီရောဂါမရှိနိုင်ဟု အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်ပေမယ့် သူ့ခန္ဓာရဲ့ထောက်ကူမှု ဟာ သိသိသာသာလျော့နည်းလာတာကိုတော့ သိရှိနေသည်။ဆရာဝန်ပြောကြားချက်အရ မူးယစ်ဆေးကို မသန့်ရှင်းသည့်ဆေးထိုးအပ်နဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတာတို့နှင့် လိင်တူလိင်ကွဲဆက်ဆံမှု ကနေ ကူးစက်သည်ဟု ပြောပေမယ့် သူက လိင်တူဆက်ဆံရခြင်းအမှု ကို အထူးရွံရှာသူဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ပြည့်တန်ဆာများနှင့် လွန်လွန်ကဲကဲ အပျော်အပါးလိုက်စားမှု ကိုတော့ မရှောင်ကျဉ်ခဲ့။ဒီရလဒ်ကြောင့် ကူးစက်ရသည်ကို သိသွားတဲ့အခါမှာ ကိုကင်းတွေကို ခါတိုင်းထက်ရှု ရှို က် သုံးစွဲပြန်သည်။အရက်တွေပိုသောက်သည်။ခန္ဓာကိုယ်က ခါးလယ်ကပိုင်းဖြတ်ခံရသော အပင်တစ်ပင်လို ခွေကျသွားပြန်သည်။ ရွန်တို့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါဖြစ်ရသော ကာလသည် အခြေအနေအဆိုးဝါးဆုံး အချိန်ကာလတစ်ခုပါပဲ။ယခုခေတ်လို အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှု ကို ထိန်းချု ပ်ပေးသည့် ART လို ဆေးဝါးတွေလည်း မပေါ်ပေါက်သေး။ဟိုဆေးက တည့်နိုးနိုး ဒီဆေးက ကောင်းနိုးနိုး စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်သာ ရှိသေးသည်။ထိုအခါဝယ် ရွန်တို့လို လူနာတွေသည် ဆေးကုမ္ပဏီတွေ၏ အစမ်းသပ်ခံလူနာမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်သည်။ဆေးရုံကို တစ်ဖန်ပြန်ရောက်သောအခါတွင် သူလို လူနာတွေအတော်များများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။သူ့ခုတင်ကပ်ရက်မှာ နောင်တွင် ဘဝရုန်းကန်ဖော် မိတ်ဆွေဖြစ်လာမည့် မိန်းမလျာ ရေရွန်နှင့် ဆုံရပြန်သည်။ဖြစ်တည်ခံစားနေရသည့် ဘဝမွန်းကြပ်မှု များကြောင့် အနာဂါတ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရွန်ရဲ့စိတ်အစုံဟာ ကြည်လင်မှု အားနည်းနေချိန်မှာ ကနဦးကပင် မိန်းမလျာတွေဆိုရင် မြင်ပြင်းကတ်လေ့ရှိသည့်အတွက် အေ့စ်ဝေဒနာသည် ရေရွန်အနားကပ်လာချိန်တွင် နှင်ထုတ်ပစ်သေးသည်။ အေ့စ်ရောဂါသည်မှန်းသိရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းထဲက စွန့်ပစ်ပစ်ပယ်သူသာ ပေါများသည့် လူလောကဝယ် ရွန်၏ မိတ်ဆွေတွေကလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ပါပင်။ရွန်ကို ရှောင်ဖယ်ကြသည်။အသားချင်းထိမှာပင် ကြောက်ရွံ့နေကြ၏။ထိုအခါမျို းမှာ သူအော်ညံဆဲဆိုထားသော မိန်းမလျာ ရေရွန်ကမူ စိတ်မဆိုးဘဲ သူ၏ခြေသလုံးပုလွေ ရိုးလေးကိုပင် ကြွက်တက်ဝေဒနာခံစားရချိန်၌ နှိပ်နယ်ပေးသေးသည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် အကောင်းမြင်စိတ်ကလေး ဝင်သွားသလိုပင်။ ရွန်အနေဖြင့် မပေတေရဲတော့။လူသားတစ်ဦးပီပီ သေဆုံးရမယ့်ကာလနောက်ဆုံးအထိ စိတ်အားတင်းရမည်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ပုံရသည်။ဒီလိုမျိုးဘာဆေးဝါးမှ အတိအကျ မရှိသည့် စမ်းတစ်ဝါးဝါးကာလမျို းမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိဘာသာ ထိန်းကျောင်းခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်ပါလား။ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကနေတစ်ဆင့် AZT ဆေးဝါးကို သုံးစွဲလျှင် ဝေဒနာသက်သာသည်ဟု သိရသည်။သို့ပေမယ့် ယင်းဆေးဝါးတွေကလည်း အတိအကျအထောက်အကူပြု တယ်လို့ ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်ကလည်း မရှိသေးပေ။ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူလို့လည်းမရပေ။ သူခိုးဝယ်သည်။မှီဝဲကြည့်သည်။သက်သာမလာ ပိုဆိုးလာသည်။ထို့နောက်ပိုင်းကာလများသည် ရွန် တစ်ယောက် ယင်းဝေဒနာဆိုးကြီးကိုကြံ့ကြံ့ခံကာကွယ်သော အထူးသဖြင့် ဆရာဝန်တွေက သတ်မှတ်ပြောကြားထားသည့် ယင်းရောဂါဝေဒနာဖြစ်ပါက နှစ်ကာလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဧကန်မုချ သေဆုံးရမည် ဆိုသည့် စကားရပ်ကြီးကို စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှု ။အထောက်အကူပြု နိုင်သော နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို ကြို းစားရှာဖွေကာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပြသည့် အေ့စ်ဝေဒနာဆိုးကြီးအား ခုတင်ပေါ်ဝယ် တစ်ရှုံ့ရှံ့ထိုင်ငိုကာ အရှူံ းပေးမယ့်အစား လက်တွေ့ကျကျ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ပြသည့် အချိန်ကာလတွေကို ပြဆိုသွားခြင်းဖြစ်သည်။ရွန်သည် လက်တွေ့ဘဝဝယ် ရှိခဲ့သော အေ့စ်ဝေဒနာဖြစ်ရပ်များအတွက် အတုယူရှင်သန်တတ်စေဖို့ စံနမူနာပြ ကြို းစားပြခဲ့သော လူပုဂ္ဂို လ်တစ်ယောက်လို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ယခု ခေါင်းစဉ်ပါ Dallas Buyers Club ဆိုတာက အေ့စ်ဝေဒနာလျော့ပါးဖို့အတွက် အထူးသဖြင့် AZTဆေးဝါးက အလုပ်မဖြစ်မှန်း သိရှိသွားတဲ့အခါမှာ သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားသော ဆေးဝါးများဖြင့် ဘဝတူဝေဒနာရှင်များအား ဖြန့်ဝေကုသသော ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်လို့ ပြောလို့ရပါမည်။ထို့နောက်တွင် မိန်းမလျာအေ့စ်ရောဂါဝေဒနာရှင်လေး ရေရွန်နှင့်အတူ FDA လို ဆေးဝါးထိန်းချု ပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တွေကိုပါ ရင်ဆိုင်ကာ ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုရုပ်ရှင်တွင် အေ့စ်ဝေဒနာသည်များအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားသည့် မက်သရူး မက်က္ကနောဟေးနှင့် မိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်အဖြစ် ပါဝင်ထားသော ဂျရတ် လက်တိုတို့နှစ်ဦးလုံး အနေဖြင့် အော်စကာဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခြင်းမှာ အထူးပင် အံ့သြဖွယ်ရာ မရှိချေ။မက်သရူး မက္ကနောဟေးဆိုလျှင် လူကောင်ထွားထွားကြီးနှင့် ကြမ်းကြမ်းဇာတ်ရုပ်မျို းတွေသာ လိုက်ဖက်သူဟု ရှူ မြင်ခဲ့ပေမယ့် ယခုရုပ်ရှင်မှာမူ စာတန်းသာထိုးမထားလျှင် သူဟုပင် သိနိုင်ကြမည် မထင်ပါ။ရောဂါဝေဒနာ နှိပ်စက်မှု ကြောင့် ပိန်ချုံ းကျုံ လှီနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကလေးနှင့် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သလို ဂျရတ်လက်တိုမှာလည်း မိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်ကို ကြည့်သူတွေ ရင့်နင့်အောင် သနားမိလာအောင် ပိုလိုသော အိုက်တင်မျက်နှာပေးတွေ အမူအယာတွေလည်း လုံးဝမပါဘဲ ဆေးစွဲနေသူ ။ဘဝတူ ကူညီအားပေးသည့် မိတ်ဆွေတွေကို ဖြူ ဖြူ စင်စင် ခင်တွယ်ရှာသူ။တတ်အားသမျှ ကူညီပေးတတ်သည့် မိန်းမလျာလေးတစ်ဦးအဖြစ် ဇာတ်ပို့နေရာကနေ ကြည့်ရှု သူစိတ်တွေဆီကို စွဲကျန်အောင် ထားရစ်ခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ပင် နိုင်ငံတကာကချီး မြှင်သော အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခြင်း ဖြစ်တန်ရာ၏။ ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးမှာ နေ့စဉ်လိုလို မတော်တဆမှု ကြောင့် ဖြစ်စေ ။ရောဂါဝေဒနာများကြောင့် ဖြစ်စေ သေဆုံးနေကြရချည်းသာ ဖြစ်သည်။ထိုအခါဝယ် အေ့စ်လို ရောဂါမျို းကလည်း ရောဂါအထွေထွေထဲက ရောဂါတစ်မျို းမျို းသာ မဟုတ်ပါလား။ထိုရောဂါဆိုးကြီးကို မည်သူမျှတော့ လက်ခံချင်ကြမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါသည်။သို့ရာတွင်မူ အကြောင်းအမျို းမျို းကြောင့် မိမိတို့ထံကို ရောက်ရှိလာတာမျို းလည်း ကြုံနိုင်ပါသည်။သေခြင်းတရားကတော့ နည်းလမ်းအမျို းမျို းနှင့် ရောက်လာနိုင်တာပါပဲ။အေအိုင်ဒီအက်စ်ကရော တကယ်ပင် လူသားတစ်ယောက်ကို မည်သူကမျှ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘဲ လက်မှို င်ချကြည့်ရှု့နေရသည့် ရောဂါဆိုးကြီးဆိုတာတကယ်ပဲလား။ရွန်လို လူသားတစ်ယောက်ကတော့ ကနဦးခေတ်ကာလမှာပင် အပြုံ းမပျက်ဘဲ တွန်းလှန်ပြသွားခဲ့ပါသည်။ဒါဟာ ကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးသောဝေဒနာထဲက ထူးမခြားနားသည့် ဝေဒနာတစ်ရပ်လို သဘောမျို းသာဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်က ကြံ့ကြံခံတိုက်ခိုက်၍ သက်သေပြသွားခဲ့ပါသည်။ ယခုခေတ်ကာလတွင် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတွေ။စနစ်တကျ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီဖြစ်သည့် ဆေးဝါးတွေကိုလည်း သုံးစွဲရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ရွန်လို ဟေ့ကောင်တွေ ငါမသေဘူးကွ။ငါရက်သုံးဆယ်အတွင်း သေမှာဆို ။ငါမသေဘူးကွ။ဘဝက ဒီလိုမျို းကြုံ မယ်လို့တော့ ဘယ်တွေးမိမလဲ။ဖြစ်ချင်တာက မိသားစုကလေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်ပေါ်မှာ စီးနင်းဖျော်ဖြေပြတဲ့ မြင်းစီးသမား ဖြစ်ချင်တာ ဆိုပဲ။သူကတော့ ပြောသည့် အတိုင်း ဝေဒနာကြီး ရှိနေလျက်နဲ့ လုပ်ပြခဲ့သည်။သေမင်းကို လှောင်ပြုံးပြုံးပြသွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရော အရာရာ ရှုံ းနိမ့် အဆိုးတွေလာရောက်နှိပ်စက်ကလူပြု နေတုန်းမှာ ရွန်လို အဲဒီအဆိုးတရားတွေကို ပြုံ းပြပြီး လက်လှဲအနိုင်မယူနိုင်ဘူးလားဟု မေးရင်းဖြင့်သာ။
Gary Oldman တစ်ယောက် Darkest Hour ရုပ်ရှင်နဲ့ Golden Globe Best Actor Award ရသွားပြီ၊ Academy Awards မှာလဲ Best Picture နဲ့ Best Actor Nomination ဝင်ထားပြန်ပြီ။ လူတိုင်းသိတဲ့ ဝင်စတန်ချာချီအကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်က ဘာလို့များ ဒီလောက်နာမည်ကြီးနေရတာလဲ? Darkest Hour ဟာ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပေမယ့် ဝင်စတန်ချာချီရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြတာလဲမဟုတ်သလို ဒီကားထဲမှာ စစ်တိုက်တာတွေလဲ မပါပြန်ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ အဓိကပြသွားတာကတော့ ချာချီ ဝန်ကြီးချုပ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်၊ ဂျာမနီရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကြီးကို ပြန်အံတုနိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ပါတီ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာတင် ဘယ်လောက်တောင် လုံးလည်ချာလည်လိုက်ခဲ့ရလဲဆိုတာတွေပါ။ ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်ရှင်က ဘာလို့များ ဒီလိုဆုတွေအတွက် လျာထားခံရသလဲ? အဖြေကရှင်းပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ Gary Oldman ဟာ တကယ့်ဝင်စတန်ချာချီ ဝင်သရုပ်ဆောင်နေသလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် တူလွန်းလှပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၁၈ နာရီရိုက်ကူးရေးလုပ်ရပြီး ၆ နာရီသာအိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဝင်စတန်ချာချီလို ဗိုက်ပူပူနဲ့ လူကောင်လုံးလုံးကြီးဖြစ်အောင် ပိန်ပိန်ပါးပါး Gary Oldman ဟာ လူခန္ဓာကိုယ်ပုံစံတူပြုလုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံအကြီးကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးလိပ်တွေသောက်ရလွန်းလို့ အဆိပ်သင့်တဲ့အထိလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့လောက်အထိကို ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ဝင်စတန်ချာချီကို ဘယ်တုန်းကမှမမြင်ဖူးတဲ့ အမြင်နဲ့ တွေ့ရတာပါ။ ဇာတ်လမ်း အစအလယ်အဆုံး ဆူပုတ်ပုတ် ဂျစ်ကန်ကန်ပုံစံ ဝင်စတန်ချာချီကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့နာမည်ကျော် မိန့်ခွန်းတွေကိုလဲ နားထောင်ရမှာဖြစ်သလို ဘုကလန့်ဂွစာပုံစံတွေကိုလဲ ကြည့်ရှူရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းက တခြားအတ္ထုပတ္တိရုပ်ရှင်တွေလိုမျိုး ဇာတ်အိမ်အရမ်းနက်နဲမှုမရှိပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သမိုင်းရုပ်ရှင်တစ်ကားကို စိတ်ဝင်စားအောင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ သမိုင်းအချက်အလက်တွေလဲ အများကြီးပါဝင်သလို ပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေကလဲ Gary Oldman ရဲ့ ချာချီဇာတ်ကောင်ကို အများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့ ဒန်းကတ်ကမ်းခြေမှာသောင်တင်နေတဲ့ စစ်သား ၄သိန်းကို ကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံထားပြီး ဝင်စတန်ချာချီအနေနဲ့ ဒီလူ ၄ သိန်းကို ကယ်ထုတ်ဖို့၊ သူ့ကို ဗြိတိန်လွှတ်တော်၊ ဘုရင်၊ သူ့ရဲ့ပါတီဝင်တွေ ယုံကြည်လာအောင်၊ ပြည်သူတွေ သူ့ကိုထောက်ခံအားပေးလာအောင် ဘယ်လိုအားထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးရင် ချာချီရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား၊ သူ့ရဲ့ခံယူချက်၊ သူ့ရဲ့သတ္တိကို ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်လာမှာသေချာပါတယ်။ ဒီနှစ် Academy Awards မှာတော့ The Disaster Artist မင်းသား James Franco မရမှာသေချာနေပြီဆိုတော့ Gary Oldman ကိုတော့ တစ်ပေးထားလိုက်ပါပြီ။ ဆုတွေလဲအများကြီးဆွတ်ခူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်သလို Academy Award Best Picture Nominee ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီးရင် Christopher Nolan ရဲ့ Dunkirk ရုပ်ရှင်ကိုလဲ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားနှစ်ကားက ဆက်စပ်မှုရှိနေသလို နှစ်ကားလုံးကလဲ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု လျာထားခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
mmbusticket ဖုန်းရွှေပညာရပ်အရ မင်္ဂလာမြေဟာ လူသားတွေရဲ့ကံဇာတာကို တိုးတက်စေဖို့ များစွာကူညီပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီကားလေးထဲမှာတော့ အထက်တန်းစားမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်မျိုးနွယ်စုဟာ မိမိတို့ အလိုပြည့်ဖို့ ဖုန်းရွှေပညာနဲ့ မြေရဲ့စွမ်းအားတွေကို မသမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့လမ်းမှာ ဝင်နှောင့်ယှက်သူတွေကိုလည်း ရှင်းပစ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့သူတွေပါ။ တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာစောင့်သိတဲ့ သာမာန်ဖုန်းရွေပညာရှင်လေး ပတ်ဂျေဆန်း ကတော့ အမတ်ကြီးရဲ့မျက်မုန်းကျိုးခံရပြီး မိသားစုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက် ကင်မိသားစုရဲ့ မသမာမှုတွေကို တားဆီးဖို့ကြိုးစားရင်း ဖုန်းရွှေပညာကို လူသားတွေအကျိုးအတွက်သာအသုံးပြုချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြေစွမ်းအားကို အသုံးပြုပြီး တော်ဝင်မိသားစုကို ကြိုက်သလို ခြယ်လှယ်နေတဲ့ ကင်အမတ်ကြီး အုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ ဟုန်ဆိုးမင်းသားတစ်ယောက် သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေနဲ့အတူ တူတော်မင်းကြီးကို ကူညီရင်း ဖုန်းရွှေပညာရှင်လေးနဲ့ ပူးပေါင်းမိကြပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် အနှိမ်ခံတော်ဝင်ခွေးအဖြစ်နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဟုန်ဆိုးမင်းသားတစ်ယောက် မျိုးဆက်နှစ်ဆက် မင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မြေစွမ်းအားကို တပ်မက်မိတဲ့အခါမှာတော့…. ဂျိုဆွန်းပြည်ကြီး ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာလဲ… ? ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဒီကားလေးထဲမှာ ပရိသတ်ကြီး စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်….. ဒီလို မင်းမျိုးနွယ်တွေရဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေကြား နာမည်ကြီး မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Moon Chae-won ကလည်း ဒီကားလေးထဲမှာ ဖခင်အတွက် လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားနေသူ ဂေဟာမယ်ခေါင်းဆောင် ချိုဆန်းအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသေးပါတယ်နော်…. ပညာရှင် ပတ်ဂျေဆန်း အဖြစ် Cho Seung-woo ဟုန်ဆိုးမင်းသားအဖြစ် Ji Sung ချိုဆန်းအဖြစ် Moon Chae-won တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ အတော်များများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပြီး စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ရသည့်အကြောင်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်များသည် မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းစတာတွေကိုသင်ကြားပါသည်…. ဒီကားလေးကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာ ဖရန်စစ်ဘော့ရှ် ဆိုတဲ့ စပိန်သား တစ်ယောက်ဟာ သြစတြီးယားနိုင်ငံထဲက အကျဉ်းစခန်းလေးတစ်ခုမှာ အကျဉ်းသားဖြစ်နေခဲ့တယ်…. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က နာဇိတွေဟာ အကျဉ်းသားတွေကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ နှိပ်စက်မှုတွေကို အားလုံးလည်းကြားဖူးနေကြမှာပါ…. ဒီလို လူမဆန်စွာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို ဖရန်စစ်ဘော့ရှ် ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသိစေဖို့ သက်သေပြချင်တယ်…ဒါ့ကြောင့် သက်သေတွေရှာဖွေပြီး ကမ္ဘာကိုသိအောင် ကြိုးစားပါတော့တယ်.. အကျဉ်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ရတာ အချိန်မရွေးအသက်ပျောက်နိုင်တဲ့ အပြင် အန္တရယ်ပေါင်းများစွာ သူူ့ကိုဝန်းရံနေတော့ သူအောင်မြင်ပါ့လား… ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…. ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် အခြေပြုပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းမို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…
သလိုနှိမ်ချချင်နေကြတုန်းကာလတစ်ခုကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါ။လူမည်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရချိန်လည်းဖြစ်ပြီးဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အစိုးရကျောင်းတွေကိုလူဖြူလူမည်းမခွဲခြားပဲနှစ်မျိုးလုံးတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပူးတွဲကျောင်းတွေအဖြစ်ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ်တွေကိုသရုပ်ဖော်ရိုက်ကူးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားကတကယ်စိတ်ခွန်အားတွေရရှိစေသလိုဇာတ်ကားကလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်….ဒိုင်ယာလော့တွေကလည်းခမ်းနားသလိုသရုပ်ဆောင်တွေကလည်းဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေမို့လို့အသက်ပါလွန်းပါတယ်….ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့…ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့Ye Pye Sone ပဲဖြစ်ပါတယ်…
ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမီ လူသားမျိုးနွယ်တို့သည် အယူအဆအမျိုးမျိုး
နတ်ဘုရားအမျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ခပ်ဆန်းဆန်းတို့ဖြင့်ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်…
ရိုမက်တို့ညီအကို (၂)ယောက်သည် သိပ်ချစ်ကြသည့် ညီအကို (၂)ယောက်ဖြစ်သည်….
တစ်နေ့ ရေဘေးဒုက္ခကြောင့် သူတို့ မသေရုံတစ်မယ် ထွက်ပြေးကြစဉ် အခြားမျိုးနွယ်တစ်စုရဲ့
လူသားဆန်မှုကင်းသည့်ရှေးအယူအဆများကြောင့် သူတို့ဖမ်းဆီးခံရမှုသည် သေဘေးမှ တစ်ပါး
အကြောင်းမှာ ဖမ်းဆီးသည့်အဖွဲ့သည် ရိုမက်တို့ညီအကိုနှင့်အခြားသူများကို
အချင်းချင်းတိုက်ခိုက် ခိုင်းပြီး ယစ်ပူဇော်ဟန်လုပ်ခိုင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်…
သူတို့ညီအကို(၂)ယောက် ဒီသတ်ဖြတ်ပွဲကြီးက လွတ်မြောက်နိုင်ပ့ါမလား….
တခြား အရိုင်းဆန်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ထပ်တွေ့ကြဦးမလား…..
ဒီကားကတော့ ရောမမြို့ဖြစ်တည်ရခြင်းအကြောင်းကို အဓိက အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်….
ရိုက်ချက်တွေက တကယ့်ကိုကောင်းသလို သတ်ဖြတ်ခန်းတွေကလည်း ပီပြင်လွန်းလေတော့
ပြီးတော့ ဒီကားဟာ အီတလီရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုရရှိခဲ့သလို အခြားဆု (၅)ဆုနဲ့
သင် အိပ်ယာကနိုးပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျက်စီးသွားပြီရင် သင်ရော ဘာလုပ်မှာလဲ။ဂျင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ကားအက်စီးဒင့်တစ်ခုကြောင့် ဆေးရုံပေါ်မှာ နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ အရာအားလုံးဟာ တိတ်ဆိတ်နေပြီး မြို့ပြကြီးဟာလည်း သုဿန်တစပြင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာကို သူ့အနေနဲ့ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာ သူသိလိုက်ရတဲ့အခါ သူဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ၊ချစ်ရတဲ့ မိသားစုမရှိတော့တဲ့ ဘဝမှာ သူ ဘယ်လိုဆက်ရှင်သန်မှာလဲ ၊ ဘယ်ကို သွားရမှာလဲ ၊ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးရမှာလဲ။၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇွန်ဘီကားထဲမှာ ဇွန်ဘီဗိုင်းရပ်ထက်စာရင် ရန်သူငါးပါးထဲမှာ လူသားတွေကသာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသွားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် စစ်ကားတစ်ကား တင်ပေးထားပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာ မစ်ဝေးတိုက်ပွဲအကြောင်း ပါပဲ။ဂျပန်တွေ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဗုံးကျဲပြီး ၆ လအကြာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပဲ။ပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာမှာ ကြီးစိုးထားတဲ့ ဂျပန်ရေတပ်ကြီးကို အရေးနိမ့်စေခဲ့ပြီး ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲ စေခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ ဒီတိုက်ပွဲမှာသာ အမေရိကန်ရှုံးခဲ့ရင် အနောက်ကမ်းရိုးတန်းအသိမ်းခံရပြီး ဆီရာတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ လော့စ်အိန်ဂျလိလိုမြို့ကြီးတွေပါ ကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်လာခဲ့မှာပါ။ဒါကို ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ နဲ့ အင်အားနည်းနေတဲ့ ရေတပ်လေတပ်ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်တွေကို ပြန်တိုက်နိုင်ခဲ့တာ ပါပဲ။စစ်ကားကြိုက်တတ်သူတွေ အကြိုက်တွေ့ကြမှာပါ။
လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ အာဒမ်နဲ့အတူလီလီ ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုပါ ဖန်းတီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လီလီ ဟာ သန်မာတယ် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်ပြီးတော့ အကြောက်အရွံကင်းမဲ့ပါတယ်လီလီကို ဖောက်ပြန်တယ် မကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုပြီး စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ဘုရားသခင်ကငရဲကိုပို့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာ နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းရာမှာတော့ အာဒမ်ရဲ့ နံရိုးတစ်ချောင်းကို ယူပြီးဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ ဧဝ ပါ ဒါပေမဲ့ ဧဝက အားနည်းတယ်ကြောက်တတ်တယ် သူ့ဘဝ မှာ အမျိုးသားရဲ့အားပေးမှု လမ်းညွှန်မှုတွေတော့လိုအပ်နေပါတယ် ဒါကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလေးပေါ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သူတို့နိုင်ငံမှာက အဖေနဲ့သမီးတွေအတွက်သမီးတွေလက်မထပ်မချင်း ကျင်းပပေးတဲ့ အပျိုစင်ကပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်သမီးများနေ့မှာလုပ်တဲ့ အဲ့ကပွဲကို ပထမဆုံး တက်ရောက်လာသူကတော့ ရှေး ပါ။ရှေးက ကိုင်းလ် ရဲ့အရင်မိန်းမရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးတော့မိန်းမဖြစ်သူသေဆုံးပြီးမှသမီးဖြစ်သူကိုခေါ် လိုက်တာပါအဲ့ကပွဲကိုလာကြတဲ့ သမီးတွေနဲ့ အဖေတွေက သမီးတွေရဲ့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပျိုစင်ဖြစ်မှုကို လက်မှတ်ထိုး အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်ကပွဲမတိုင်ခင်မှာ ကောင်မလေးတစ်စုက လီလီ ကို တောထဲမှာဆင့်ခေါ်ပြီးသရဲခေါ်တမ်းကစားကြပါတယ်အဲ့လိုခေါ်တာက နှစ်တိုင်းလုပ်နေကြဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နေ့မှာတော့ ထူးခြားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးဇာတ်ကားကြည့်ရင်းကြောက်နိုင်ပါပြီ…
အနုပညာတကာတို့ထဲမှာ ဂီတအနုပညာဟာ လူ့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကျုံးယူနိုင်စွမ်းအရှိဆုံးအရာပါပဲ ။
မိုးဇတ်ဆိုတာကတော့ ဂီတသမားတွေထဲ ပါရမီအထူးဆုံး အကျော်ကြားဆုံးတစ်‌ယောကပါ ၊ ဒီရုပ်ရှင်က မိုးဇတ်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းပါပဲ။
တစ်ရံတရာအခါတုန်းက ဝို့လ်ဖန် အာမာဒပ်စ် မိုးဇတ်လို့အမည်တွင်တဲ့ လူငယ်ကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ၊
မိုးဇတ်ဟာ ဂီတအနုပညာနဲ့ပက်သက်ရင် အတော် ပါရမီကောင်းတဲ့ သူပါ ၊
အသက်လေးနှစ်မှာ စန္ဒားရားကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တီးတတ်ခဲ့တဲ့အပြင် လေးနှစ်အရွယ်မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်စရေးခဲ့ပါတယ် ။
သူ့ခေတ်သူ့အခါရဲ့ အနုပညာမြို့တော် ဗီယင်နာရဲ့ ဘုရင်ဟာ နာမည်ကျော် ဝို့လ်ဖန်း အမန်ဒပ်စ် မိုးဇတ်ကို သူ့ရဲ့ နန်းတော်ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ၊
ပညာတော်သလောက် အနေမတော်တဲ့ မိုးဇတ်ဟာ စကားအပြောတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။
ဘုရင်နဲ့ သူ့ဂီတမှူးတွေက ဂီတကို ချစ်တတ်ပေမဲ့လည်း မိုးဇတ်ရဲ့ ဂီတတွေရဲ့ ပြည့်စုံမှုကို ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိကြတာကလည်း မိုးဇတ်နေရာမရခဲ့တဲ့ အကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးဇတ်ရဲ့ ဂီတတွေဟာ ပရိတ်သတ်လက်ခံအားပေးမှုနောက်ကို ဘယ်တော့မှ မလိုက်ခဲ့ပါဘူး ၊ သူအထင်ကြီးတဲ့ မြို့ကြီးမှာ သူ့ဂီတတွေရဲ့ အမြင့်ကို ခံစားနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူက သူ့ရဲ့ အတွင်းကျိတ်ရန်သူ မိုးဇတ်ကို အထင်ကြီး မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်လိရိုင်ပါ။
ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုသိတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူဟာ ကိုယ့်ရန်သူဖြစ်နေတဲ့အပြင်
ဂီတနဲ့ပက်သက်တဲ့ သူ့မာနကို မချနိုင်တဲ့ မိုးဇတ်အတွက် အရာရာမှာ အဆင်မပြေမှုတွေသိပ်များပါတယ်။
35နှစ်အထိပဲ အသက်ရှည်သွားခဲ့တဲ့ မိုးဇတ်ဟာ သီချင်းအပုဒ် ၆ရာကျော်နဲ့ အော်ပရာနှစ်ပုဒ် စပ်ဆိုသီကုံးခဲ့ပါတယ်။
မိုးဇတ်ရဲ့ နာမည်ကျော် လက်ရာတွေ ဖြစ်တည်လာပုံနဲ့ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်အော်ပရာ Don Giovanni ဖြစ်တည်လာပုံတွေလည်း ပြသထားပါတယ်။
ဒီသုံးနာရီ ရှစ်မိနစ်ကြာတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ စစချင်းမှာတော့ အတော်ပျင်းစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ပထမတစ်နာရီကို ကျော်ပြီးတဲ့အချိန် မိုးဇတ်နဲ့ ဆယ်လိရိုင်တို့ကြားက Character Chemistry ခိုင်မာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီကားဟာ အတော်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်လို့ ခင်ဗျားခံစားမိလာပါမယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက မိုးဇတ်နဲ့ ဆယ်လိရိုင်တို့ရဲ့ အဖြစ်တွေဟာ တကယ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါမယ်။
အပြင်က ဆယ်လိရိုင်ဟာ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာလို မိုးဇတ်အတွက် မနာလိုနေတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမယ်။
ဆယ်လိရိုင်ဟာ မိုးဇတ်အတွက် အသုဘငိုချင်းဆိုပေးခဲ့ပြီး မိုးဇတ်ရဲ့သားကို သင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ တကယ့်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမယ်။
ရာနှုန်းပြည့်မှန်ကန်တဲ့ Biographyဆိုတာ ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။
အနုပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ ပက်သက်လာရင် နည်းလည်နိုင်ဖို့ထက် ခံစားတတ်ဖို့က ပိုအဓိကကျပါတယ်။
သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် စစ်ကားတစ်ကား တင်ပေးထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ မစ်ဝေးတိုက်ပွဲအကြောင်း ပါပဲ။
ဂျပန်တွေ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဗုံးကျဲပြီး ၆ လအကြာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပဲ။
ပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာမှာ ကြီးစိုးထားတဲ့ ဂျပန်ရေတပ်ကြီးကို အရေးနိမ့်စေခဲ့ပြီး ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲ စေခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။
ဒီတိုက်ပွဲမှာသာ အမေရိကန်ရှုံးခဲ့ရင် အနောက်ကမ်းရိုးတန်းအသိမ်းခံရပြီး ဆီရာတယ်
ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ လော့စ်အိန်ဂျလိလိုမြို့ကြီးတွေပါ ကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်လာခဲ့မှာပါ။
ဒါကို ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ နဲ့ အင်အားနည်းနေတဲ့ ရေတပ်လေတပ်ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်တွေကို ပြန်တိုက်နိုင်ခဲ့တာ ပါပဲ။
Make us dream (2018) ဟာ လစ်ဗာပူးအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် ကပ္ပတိန် စတိဗင် ဂျရက် ရဲ့ကစားသမား ဘဝအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။သူဟာ လစ်ဗာပူးကို အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ရောက်ခဲ့ပြီး၂၈ နှစ်တိတိ အသင်းအတွက် ကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ FA ဖလား ၂ ခု၊ League ဖလား ၃ ခု၊ UEFA ဖလား ၁ ခု၊FA community ဒိုင်း ၁ ခု နဲ့ UEFA super ဖလား ၁ ခု ရယူပေးခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ဒီကားလေးမှာဆိုရင် ဂျရက် ရဲ့ အပြောင်းအလဲများလှတဲ့ကစားသမားဘဝအကြောင်းကိုအတွင်းကျကျ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့Htet Wai Lwin ဖြစ်ပြီးXCode မှ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi(2016)(((Link ပြန်ချိန်ပေးထားတဲ့အပြင် 1080p 5.1CH လေးနဲ့ပါ Update ပေးထားပါတယ်…)))IMDB 7.4 အထိတောင်ရရှိထားတဲ့ စစ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 2h: 24mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာTransformers ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် Michael Bay ရဲ့ လက်ရာပါ။တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို ရိုက်ကူး ထားတာဖြစ်ပါတယ်…လစ်ဗျားနိုင်ငံဘန်ဂါဇီ မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကို အမေရိကန်သံအမတ်တစ်ဦးရောက်ရှိချိန်မှာ 2012 ခုနှစ်ကအစ္စလာမ်းစစ်သွေးကြွတွေ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ က အစ္စလာမ်းမစ် စစ်သွေးကြွတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီး 13 နာရီကြာအောင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်…
အခုတစ်ခါတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းနောက်ခံဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ ဇာတ်လမ်းလေးက အသတ်အဖြတ်တွေကကြမ်းတာမို့ တော်ရုံ ဆို မကြည့်သင့်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်ဗျဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ မာယာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ သဘာဝဘေးတွေ ကြုံတွေ့ရကာမှ ယဇ် ပူဇော်ရန်အတွက်တောထဲမှ လူမျိုးစုများကိုဖမ်းခေါ်ပြီး စတေးကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ ဖမ်းလာတဲ့ အထဲက မှ Jaguar Paw ကတော့နတ်ဘုရားတွေရဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရပြီးအသတ်ခံရနီးမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Jaguar Paw တယောက်မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံးစည်းနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကပဲဆက်လက်ကြည့်ရှူလိုက်ပါတော့ဗျာ
The Palace(2013)ဒီဇာတ်လမ်းကနန်းတွင်းကိုရောက်လာတဲ့ အပျိုတော်လေးနှစ်ယောက် ချန်ရှန်းနဲ့လျိုလီတို့အကြောင်းကိုပုံဖော်ထားတာပါလူတစ်ယောက်ကိုအနစ်နာခံပြီး ရူးရူးမူးမူးချစ်ခဲ့တဲ့ချန်ရှန်း(ZhouDongYu)နဲ့အချစ်ထက်ဂုဏ်အဆင့်အတန်းကိုပိုမက်မောတဲ့ လျိုလီ(ZhaoLiYing)တို့နှစ်ယောက်က နန်းတွင်းထဲမှာခင်သွားကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ…. မင်းသားတစ်ပါးတည်းကိုသာချစ်မိခဲ့တဲ့ချန်ရှန်းနဲ့ ဘယ်မင်းသားရရဆိုတဲ့လျိုလီတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအလှည့်အပြောင်းတွေ….လျိုလီရဲ့ရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေ…မင်းသားညီအစ်ကိုတွေကြားက ရာဇပလ္လင်လုပွဲတွေအပြင်ချင်မင်းဆက်ကမင်းသားတစ်ပါးနဲ့အပျိုတော်လေးတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလွမ်းမောဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ ၊ဒီဇာတ်လမ်းကတရုတ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ ကျောက်လိယင်းနဲ့ အနှစ်တွေချည်းပဲရိုက်တဲ့ကျိုးတုန်ယွီတို့ကိုကြည့်ရတာနဲ့တင်တော်တော်တန်နေမှာပါ
The Legion 2020 အခု မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ The Legionဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးကအရင်ခေတ်တပ်ခွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီး ကိုယ့်တပ်ခွဲအတွက် တာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်ကိုအဓိကရိုက်ကူးထားတာပါ အာမေးနီးယားမှာပိတ်မိနေတဲ့ တပ်ခွဲတစ်ခုဟာ ဘယ်လိုမှလွတ်မြောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး နေရာတိုင်းကနေပိတ်ဆို့အဝိုင်းခံထားရပြီး ရိက္ခာလမ်းကြောတွေအဖြတ်ခံထားရပါတယ် ရန်သူကဘက်ကအရှုံးပေးဖို့ပြောတဲ့စကားကိုပေခံနေရင်လည်း အစာရေစာပြတ်လပ်မှု အအေးဒဏ်တွေကြောင့် ဘယ်လိုမှလွတ်ဖွယ်ရာမရှိတော့ပါဘူး အကူအညီတောင်းခံဖို့လမ်းတွေအကုန်လည်းရန်သူတွေကပိတ်ထားတော့ တစ်မျိုးကြံရပါတော့တယ် နောက်ဆုံးမှာတော့တပ်ထဲကတောင်ပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့တပ်သားတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး ချောက်ကိုဖက်တွယ်သွားရတဲ့လမ်းကနေရွေးချယ်တာဝန်ပေးရပါတော့တယ် ချောက်လမ်းက ရန်သူတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီး အလွန်မဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းပါ အဲ့လမ်းကနေ တပ်သားလေးကသွားရပြီး အကူအညီသွားတောင်းတဲ့လမ်းမှာဘယ်လိုလူတွေ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကြုံရမလဲ အဆုံးမှာသူ့တပ်ခွဲကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့အခုပဲကြည့်ရှုလိုက်ပါ
The King and The Clown (2005)ဂုန်ဂီကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပေမယ့် သိပ်နူးညံ့တယ် မိန်းကလေးရှုံးအောင်လှတယ် aယောက်ျားတိုင်းကမိန်းကလေးမဟုတ်မှန်းသိတာတောင် လိုချင်တပ်မက်ကြတယ်…ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်ရင်း လူတွေကိုရယ်မောအောင်လုပ်ရင်း ရှင်သန်ရတဲ့ဘဝမှာယုတ်မာတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရတာမို့ မြို့တော်ဟန်ယန်းကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဂုန်ဂီတို့ ဂျိုဆွန်းမင်းကြီးကိုရယ်မောအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်…မိခင်သေဆုံးမှုကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာရှိနေခဲ့တဲ့ ဂျိုဆွန်းမင်းကြီးကိုရယ်မောအောင်လုပ်နိုင်ကြပါ့မလားဇာတ်လမ်းကဒီထက်လေးနက်တာတွေရှိပြီး ကိုယ်ကြည့်ပြီးဝင်ခံစားတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး အတွေးအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာမို့ အများကြီးမပြောတော့ပဲ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီကားကတော့၂၀၀၅ခုနှစ်လောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့Drama ကားဖြစ်ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့၁၉၇၀ခုနှစ်က တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ချန်ဟီး ကလာဘ်စားမှုတွေရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေအပေါ်ကိုလည်းအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နေခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမှာအပါးတော်မြဲနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။KCIAက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကင်နဲ့လုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်ချာဘယ်လက်ရုံးနဲ့ညာလက်ရုံးပေါ့။နောက်ပိုင်းတော့ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမကောင်းတာမှာပျော်မွေ့တတ်တဲ့သူဆိုတော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်း မကောင်းတဲ့ဖက်ကိုမြှောက်ပေးတတ်တဲ့လုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်ဖက်ကိုအလေးသာသွားပြီးပိုအရေးပေးလာခဲ့တယ်။ဒီကားမှာထူးခြားတာက KCIA အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုအကောင်းဖက်ကြီးမပြသွားဖူး။ဒီလိုအရေးပေးတာကို အရင်ကတန်းတူအရေးပေးခံရတဲ့KCIAအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်မနာလိုတွေဖြစ်နေခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ် တိုင်းပြည်ကိုအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရှင်ဆိုးတစ်ယောက်ကိုဆုံးမလိုက်တာလားဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိပါဖူး။လက်ရှိ လီဗြောင်ဟွန်းကားနဲ့ကျောရိုးသာဆင်တူပြီးဒီကားမှာဟိုကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊လူ့စိတ်သဘောနဲ့သမိုင်းကြောင်းအဓိကထားရိုက်ပြထားပါတယ်။သမိုင်းတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာတန်ပြီး သင်ခန်းစာရမယ့်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတကြီးအလုပ်ကြံခံရပြီးနောက်ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုအရှုပ်တွေရှိနေမလဲဆိုတာဇာတ်ကားကြည့်ရင်း အတူတူအဖြေရှာလိုက်ရအောင်ပါ
ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တရုတ်သမိုင်းကားတစ်ကား တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားက သာမညဇာတ်ကားတစ်ကား မဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းတင်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာ, ဒေါက်တာအတွေးခေါ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဆန်း(Dr.Sun Wen)ကိုအခြေပြု ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒေါက်တာဆန်း တစ်ယောက် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ ဂျပန်ကနေ ဟောင်ကောင်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူခရီးထွက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြိုကွဲနေတဲ့ ဂိုဏ်းဃန တွေကို ပြည်လည်စည်းရုံးပြီးQing မျိုးဆက်ကို အမျိုးဖြုတ်ဖို့ပါ။ဒီထဲမှာ China Daily သတင်းစာတိုက်ကလည်း ကုလားကာနောက်ကွယ်ကနေပံ့ပိုးနေခဲ့တာပါ။ဒေါက်တာဆန်း ရဲ့ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်ကရော ချောမွေ့ပါ့မလားသတင်းစာတိုတ်ကလည်း ဘယ်လိုမျိုး နောက်ကွယ်ကနေဘယ်လိုအထောက်ပံ့တွေပေးမှာလဲလူတစ်ယောက်ကရော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကောင်းစားရေးအတွက် ဘယ်လောက်ထိစွန့်လွှတ်ရမှာလဲဆိုတာ ဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှု့ကြပါရန်…။
ဒီကားဟာလည်း Red cliff နဲ့ တစ်နှစ်တည်း ထွက်လာခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ Red cliff လိုပဲ တရုတ်ဂန္တဝင်ဝတ္ထုRomance of the three kingdims ကိုပဲအခြေခံထားပါတယ်ဒီတော့ Red cliff မှာပရိသတ်ရင်းနှီးပြီးသား ဇာတ်ကောင်အတော်များများပြန်လည်ပါဝင်ပါတယ်။အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ လှံရေးမှာ သူမတူအောင်ကျွမ်းကျင်သူ Zhao Zilong(Red cliffပထမဆုံးအခန်း မှာ Lui Bei ရဲ့ သားငယ်ကိုကယ်တင်ခဲ့သူ)အဖြစ် မင်းသားကြီး Andy lau က ပါဝင်ထားပါတယ်။အက်ရှင်ခန်းတွေ အရမ်းမိုက်ပြီး အထူးသဖြင့် setting ဟာ 2008 ထွက်ကားလို့မထင်ရအောင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။စစ်ဝတ်စုံ တွေဟာ red cliff ထဲကထက် smart ကျပြီး အက်ရှင်ခန်းတွေကတော့ red cliff ကိုမကျော်ဘူးဆိုရင်တောင် မနိမ့်ကျပါဘူး။ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ကတော့ Cao Cao က Lui Bei ရဲ့နယ်မြေကိုကျူးကျော်နေချိန်မှာ သာမန်တပ်သားငယ်လေးဖြစ်တဲ့ Zilong ဟာသူ့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့် ထင်ရှားလာပုံ ရန်သူခေါင်းဆောင် Cao Cao ကိုယ်တိုင် လေးစားရပုံ ကျားဗိုလ် ငါးယောက်မှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်လာပုံ Cao ရဲ့ မြေးမ(Maggie Q)နဲ့ ရင်ဆိုင်ရပုံ တွေကို စစ်အခင်းအကျင်းခမ်းနားစွာနဲ့တင်ဆက်ထားတာမို့ ကြည့်ရတန်တဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်တာ အသေအချာပါပဲ ဒါကြောင့် Red cliff တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရင်း Admin တို့ ဒီကားလေးကိုပါတင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်
Torpedo: U-235 (2020) အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ Torpedo ဆိုတဲ့ actionကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Torpedoဆိုတာ ဟိုးအရင် ဂျာမန်တွေနဲ့ အမေရိကန်တွေစစ်ဖြစ်တုန်းက ဂျာမန်တွေသုံးတဲ့ U-boatဆိုတဲ့ သင်္ဘောမှာတဲ့ ကျည်ဆန်အမြှောက်ပါ ဒီကားလေးကတော့ အမေရိကန်ဘက်ကနေနေပြီး သူလျှိုလုပ်ပေး တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ တပ်သားဟောင်းအုပ်စုကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် သူတို့အုပ်စုကတောထဲမှာပဲနေပြီးတာဝန်တွေလုပ်နေရာကနေ တစ်နေ့မှာ အာဖရိကကနေ အမေရိကထိသွားပြီးလုပ်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခုကိုရလာပါတော့တယ် အမေရိကန်တွေဘက်ကနေ ဗုံးလုပ်ရမယ့်သုံးတဲ့အပြင်းစားယူရေနီယံတွေကို ဂျာမန်တွေရှိတဲ့ အာဖရိကကနေ U-boatနဲ့သယ်သွားပေးရမှာပါ ဒီတာဝန်ကအတော်အရမ်းများပြီး riskယူရမယ့်တာဝန်လည်းဖြစ်တဲ့အလျောက် ဂျာမန် U-boatကိုင်တွယ်နည်းကိုသင်ကြားပေးမယ့် ဂျာမန်စစ်မှူးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းပြီး ၃ပတ်ကြာလေ့ကျင့်ရေးဆင်းခဲ့ရပါတယ် မူလနေရာကနေစထွက်ကတည်းက အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတဲ့သူတို့အုပ်စုဟာ သမုဒ္ဓရာကိုဖြတ်ပြီး အမေရိကန်ထိသွားနိုင်မှာလား လမ်းမှာဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ရဦးမှာလဲ တာဝန်ကိုရောအသက်ရှင်လျက်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာလားဆိုတာကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် သွေးထွက်သံယို အခန်းတွေ ပါဝင်တာကြောင့် အသည်းငယ်တဲ့သူတွေ မကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
“အိုစမာဘင်လာဒင် ” ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကျော် နာမည်ကိုအားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ ၂၀၀၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ညီနောင်အဆောက်အအုံနှစ်ခုကိုအယ်ကေးဒါးတို့ လေယာဉ်နဲ့ ဝင်တိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လူ၃၀၀၀ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ (၉/၁၁)လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ကိုအဓိကကြိုးကိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပြီး အိုစမာဘင်လာဒင်ဟာ ကမ္ဘာ့အလိုရှိဆုံး အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့် ၉/၁၁အပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာတဲ့အထိအမေရိကန်တို့ ဘင်လာဒင်ရဲ့အရိပ်အယောင်ကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့လက်ကနေနှစ်အများကြီးလွတ်အောင် ဘင်လာဒင် ဘယ်လိုပုန်းကွယ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီလိုပုန်းကွယ်နေရင်း အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေနဲ့ အမေရိကန်ကို ဘယ်လိုဆက်လက် အထိနာစေခဲ့သလဲနောက်ဆုံးမှာ အပုန်းကောင်းသူကြီး အိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့နေရာကိုအမေရိကန်တို့ ဆယ်နှစ်ကြာအောင် စတေးမှုတွေနဲ့ ဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေပြီးသုတ်သင်ခဲ့ရလဲ ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်တွေကိုဒီရုပ်ရှင်မှာအသေးစိပ် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်Imdb rating 7.4နဲ့ Rotten tomatoes 91%ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်‌Zero Dark Thirty ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့သန်းခေါင်ယံနဲ့အာရုံမတက်မီ ကြားကာလကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာ ဘင်လာဒင်ကို သုတ်သင်ခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၇၇၆ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ ခေတ်မှာနေထိုင်တဲ့ ဘင်ဂျမင် မာတင်ဟာFrench-Indian စစ်ပွဲမှာ သူရဲ့ရက်စက်မူတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ သူ့ရဲ့အတိတ်ကအပြစ်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မူ့ကနေ ဝေးဝေမှာနေလိုပြီး မိခင်မရှိတော့တဲ့ သူကလေး၇ယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်နေပါတယ်။ သို့သော်က မပါတ်သတ်လိုပေမယ့်ဂရိတ်ဗြိတိန်ရဲ့လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးကို ရယူဖို့ တော်လှန်မူမှာ တောင်ကာရိုလိုင်နား က ဝင်ရောက်ပူပေါင်းခဲ့ရာမှာတော့သူရဲ့သားကြီး ဂေဘရီရယ်ဟာ သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲ စစ်ထဲကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တားမရတဲ့သားကို လက်လျှော့လိုက်ရပြီး ကျန်သားသမီးတွေကို စောင့်လျှောက်နေရင်း တနေ့ သူအိမ်နားမှာဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုတပ်တွေနဲ့ ဗြိတိသျှတွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာသားဖြစ်သူက ဒဏ်ရာရလာခဲ့ပါတယ်။ သားဖြစ်သူကို ဒဏ်ရာကို ကုသပေးပြီး နှစ်ဖက်ထိခိုက်သူတွေကို ပြုစုပေးနေချိန်ဗြိတိသျှ မြင်းစီးတပ်က သားသတ်သမားလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး တာပင်တန်ရဲ့လက်ချက်ကြောင်သူ့ရဲ့အစားထိုးမရတဲ့သားကို ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ အင်မတန်ဒေါသကြီးပြီးရက်စက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ ဘင်ဂျမင်တယောက်တော်လှန်ရေးကြီးထဲပါဝင်လာရပြီး ပြည်ထောင်စုတခုဖြစ်ဖို့ တပိုင်းတစကူညီရပါတော့တယ်။Mel Gibsonရဲ့ Brave Heart နဲ့ We were Soldierကြားက ထွက်ခဲ့တဲ့ The Patriots ဟာ တခြားစစ်ကားတွေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားနေတာက နှစ်ဖက်စစ်တပ်တွေ မျက်နှာခြင်းဆိုင် တန်းစီပြီး တဖက်ကိုတလှည်စီသေနတ်နဲ့ပစ် လှံစွပ်ထိုးတိုက်ပွဲတွေက အမြင်ဆန်းသစ်နေပါတယ်။နောက်တခုက ဂျိုကာပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဂေဘရီရယ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Heath Ledgerကို အလွမ်းပြေကြည့်ရှူရမှာပါ။ဒီဇတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ ထက်အောင်လင်း ဖြစ်ပြီး အညွှန်းကိုလဲ သူကိုယ်တိုင် ရေးပေးထားပါတယ်…
စစ်ကားလည်းကြည့်ချင်တယ်…စစ်ပဲတိုက်နေရင်လည်း မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ဖိလစ်ပိုင်
အချစ်စစ်ကားလေး လာပါပြီ…မင်းသားချော Paulo Avelino နဲ့ Carlo Aquino တို့ ပါဝင်သလို
မင်းသမီးနေရာမှာလည်း Gwen Zamora နဲ့ Empress Schuck တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်.
..ဒီဇာတ်လမ်းဟာ သုံးနှစ်တာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်-ဖိလစ်ပိုင် စစ်ပွဲကြီးကို ကျောရိုးပြုထားပြီး အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှ
ာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးဗိုလ်ချုပ် Gregorio Del Pillar အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ..
.ဇာတ်လမ်းနာမည်မှာပါတဲ့ Goyo ဆိုတာကတော့ မင်းသားနာမည်ဖြစ်ပြီး The Boy General
ဆိုတာကတော့ မင်းသားရဲ့ Nick Name ပါ…ကဲ အညွှန်းလေး ဆက်သွားကြဦးစို့… ဇာတ်လမ်းအညွှန်း
Gregorio Del Pillar ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေးဟာ အဲ့ဒီခေတ် အဲ့ဒီအခါက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်..
.ခုခေတ်အခေါ်ဆို စော်ကြည်ဘဲလေးပေါ့…The Boy General လို့ နာမည်တပ်ခံရတဲ့ ဒီစော်ကြည်ဘဲလေးဟာ
အသက်ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ မတ်မတ်တွေအကြိုက်ပေါ့…ဒီကောင်လေးကလည်း အချဉ်မဟုတ်..
.သူကလည်း အသည်းခွဲလူမိုက်လို့ ခေါ်ရလောက်အောင် ပွေတဲ့သူ…စစ်တိုက်ထွက်ရင်းနဲ့ ရောက်တဲ့မြို့တိုင်းမှာ စော်တဗွေထား…
ခဏတွဲပြီး အမြဲထားခဲ့တတ်သူ…ဒီကောင်လေးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့..
.ဟော လာပါပြီဗျာ…မတ်မတ်လာပါပြီ…မတ်မတ်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့အနေအထိုင်
ရင့်ကျက်တဲ့အပြုအမူ ငြင်သာတဲ့အပြောအဆိုတွေအောက်မှာ ဒီစော်ကြည်ဘဲလေး ဘယ်ခံနိုင်ရိုးလား.
..အဲ့တာက ရို အပိုင်း… စစ်ကားအမည်တပ်ထားတယ်ဆိုတော့ စစ်လည်း တိုက်ရမယ်မဟုတ်လား..
.ဒီမောင်မောင်လေး စစ်ထွက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ရင့်ကျက်လှပါပြီဆိုတဲ့ မတ်မတ်လည်း ဘယ်နေနိုင်ပါ့မလဲ.
..စစ်ထွက်ခါနီးချစ်သူကို အမှာတွေခြွေနေတာတွေ ကြည့်လိုက်ရင် ခင်ဗျားတို့ စော်ရှိတဲ့သူတွေ
တတိယကမ႓ာစစ်တောင် ဖြစ်ချင်သွားမယ်…ကျန်တာကတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုပဲ ဒေါင်းပြီး ကြည့်လိုက်ကြပါတော့လို့…
Jessie ( 2019 )
2019 မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Horror | Thriller အမျိုးအစားဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ပရော်ဖက်ရှင်သရဲတစ္ဆေလိုက်သူအဖွဲ့ဟာ ညီအမ ၂ယောက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့
ဒါကြောင့် သူတို့တွေဟာ ညီမ၂ယောက်ရဲ့ ဆန်းကြယ်မှုကို
ကြိုးစားနေတဲ့နေရာကတော့ စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ အိမ်တလုံးမှာပေါ့
အဲ့အိမ်မှာပဲ သရဲလိုက်သူ အဖွဲ့ဟာ အေမီနဲ့ ဂျက်ဆီတို့၂ယောက်ကို
အမေရိကန်သမိုင်းမှာ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီထဲမှာမှ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၁၇ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဟူစတန်မြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကရုဏ်းမှာတော့
“၁၉၁၇ ဟူစတန်အဓိကရုဏ်း(သို့) လိုဂန်တပ်စခန်းပုန်ကန်မှု”ကိုအခြေတည်ပြီး
နယ်ခံလူဖြူရဲတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုကိုလဲခံရပါတယ်။ လူမည်းတွေကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ဥပဒေကြောင့်
နောက်ဆုံးထွက် netflix Horror ဇာတ်ကားလေးပါပဲ
2020 augustလမှာထွက်ထားတဲ့ ထိုင်ဝမ်သရဲကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
စတင်ထုတ်လွှင့်ချိန်ကနေ ခုချိန်ထိ Box office worldwideမှာ $347513ဝင်ငွေရရှိထားပါတယ်
CGI effectတွေမပါပဲ ပြင်ပမှာတစ်ကယ်သရဲခြောက်ခံနေရသလိုရိုက်ကူးထားလို့
live လွှင့်ကြေငြာဖို့ ပြင်ဆင်ကြတဲ့အခါ…
ထင်မထားတဲ့လှည့်ကွက်တွေပါတဲ့ စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ် Horror ကားကောင်းတကားပါ
ဒီတစ်ခေါက် ဇာတ်ကားလေးကတော့ ၁၉ရာစုနှောင်းပိုင်း အမေရိကန်မှာ နေထိုင်လျက်ရှိသော မိန်းမပျိုလေးအကြောင်းကို အဓိကထားပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
အဲ့ဒီမိန်းမပျိုလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ နက်ခိုမီ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ဖခင်မှာ လူဖြူလူမျိုးဖြစ်ပြီး မိခင်မှာ လူမဲလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူမမှာ အကိုနဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
သူမတို့မိသားစုလေး ပျော်ရွှင်ချိန်ဟာ အရမ်းမရှည်ကြာခဲ့ပါဘူး။ သူမ ၁၇ ၊၁၈ အရွယ်မှာပဲ အိမ်မီးလောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကော မိဘနှစ်ပါးကိုပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ခေတ်အချိန်ခါတုန်းက လူမျိုးရေးဝါဒီဟာ ထွန်းကားနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို ဘယ်သူမှ မကူညီ လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ဟာ ရှိရာနေရာလေးမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ အသက်မွေးခဲ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ဆီ လူရမ်းကားတစ်စု ရောက်လာပြီး သူမ၏ ညီမလေးကော အကိုပါ ထွက်ပြေးရင်း အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ နက်ခိုမီလေး ဟာပြေးရင်းပြေးရင်း အက်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ လူဖြူမိန်းကလေးတို့အိမ်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
တခြားသော သူတွေနဲ့မတူညီစွာပဲ အက်တယ်တို့မိသားစုဟာ နက်ခိုမီလေးကို ဆေးကုပေးပြီး သူတို့အိမ်မှာပါ နေဖို့ခွင့်ပြုပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နက်ခိုမီတို့ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့လူတွေကတော့ နက်ခိုမီ ကိုဖမ်းချင်နေတုန်းပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ နက်ခိုမီလေးဟာ အက်တယ်တို့မိသားစုလေးနဲ့ရော ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ကြသွားလဲ လူဆိုးတွေလက်ကရော လွတ်မလား… နောက်ထပ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။
Drama နဲ့ History အမျိုးစားလေးဖြစ်လို့ ဇာတ်လမ်းအတက်အကျ တွေကို ရင်သတ်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။
Fall in Love With My Badboy ( 2020 )
FA မမတွေအကြိုက် အသည်းတယားယားကြည့်ရမယ့် အချစ်သိုင်းကားလေး လာပါပြီနော်
ဂိုဏ်းထဲပညာသင်ဖို့ ဝင်ဝင်ချင်းမှာတင် ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကို
လူကြားထဲအရှက်ရအောင်လုပ်မိလို့ ပြန်တောင်းပန်ရတဲ့အနေနဲ့ သုံးလတိတိ
ခိုင်းသမျှမညည်းမညူလုပ်ပေးနေရတဲ့ လင်ယွဲ့ရှန်း (ရှန်းရှန်း) ဟာ တစ်ဖက်မှာ
စည်းကမ်းတင်းကျပ် ဒေါသကြီးတဲ့ လုံရှောက်ချန် (ချန်) ညှဉ်းဆဲသမျှခံနေရပေမယ့်
နာက်တစ်ဖက်မှာတော့ နူးညံ့နွေးထွေးပြီး သူ့ကိုအမြဲဖေးမပေးတတ်တဲ့
သွမ်းမုကျယ် (ကျယ်) ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ခံနေရပါတယ်။
အဖြူနဲ့အမည်း ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့နူးနူးညံ့ညံ့ ပေပေတေတေနဲ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်
သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ရှန်းရှန်းတစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေ နေရလည်းဆိုတာကို
အားပေးကြည့်ရှုရင်း စိတ်ပျိုကိုယ်နု ဖြစ်ကြည့်ကြပါဦးနော်
ဒီဇာတ်ကားလေးကို The Black Devil and The White Prince ဆိုတဲ့
၂၀၁၆ ထုတ်ဂျပန်ကားလေး ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေတော့ ဇာတ်လမ်းအကြမ်းလောက်ကို
သိကြမှာဖြစ်ပေမမယ့်လို့ လုံးဝမတူတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့
ဖီလင်နောက်တစ်မျိုးကို ရရှိမှာလည်း အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဇာတ်လမ်းနာမည် ဂလိုရီ ဆိုတာကတော့ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ် ကာလက တိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြသထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမည်းတွေ ကျွန်ဘဝက ကင်းလွတ်ခွင့်အမိန့်ကို သမ္မတ လင်ကွန်းက ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ပထမဆုံး လူမည်း တပ်ရင်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မက်ဆာချူးဆက် တပ်ရင်း (၅၄) ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လူဖြူစစ်သားတွေကလည်း လူမည်းတွေကိုအထင်မကြီးသလို လက်ထဲကို သေနတ်အပ်ဖို့လည်း မယုံကြည်နိုင်သေးပါဘူး။ ပိုဆိုးသွားတာက တောင်ပိုင်းစစ်တပ်က မြောက်ပိုင်းက ဝင်တိုက်တဲ့ လူမည်းမှန်သမျှ သေဒဏ်ပေးမယ်လို့ ကြေညာစာတမ်း ထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ တပ်ရင်းမှူး က ထွက်လိုက ထွက်နိုင်ပြီလို့ ကြေညာခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်မှ လျော့မသွားခဲ့တဲ့ တပ်ရင်းပါ။ ဒါပေမယ့် တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးက စစ်မတိုက်ရသလို ဗြူဟာမှူးကိုယ်တိုင်က အလုပ်ကြမ်းတွေပဲ ခိုင်းထားပြီး နှိမ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို မခံနိုင်တဲ့ တပ်ရင်းမှူးက နောက်ဆုံးမှာ သမ္မတ လင်ကွန်းအထိ စာတင်ပြီး၊ ဗြူဟာမှူးရဲက နှိမ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို အကြောင်းပြ ချမ်းသာအောင် စီးပွားရှာနေတဲ့အချက်နဲ့ အကြပ်ကိုင်ပြီး စစ်တိုက်ခွင့်တောင်းယူခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလူမည်းတပ်ရင်းရဲ့ နာမည်ကျော် ဝက်ဂ်နာ ခံတပ်သိမ်း တိုက်ပွဲ အကြောင်းပါပဲ။ တိုက်ပွဲမှာ တပ်ရင်းမှူးအပါအဝင် တပ်ရင်းတစ်ဝက်လောက် ကျဆုံးခဲ့သလို နိုင်လည်းမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စတိုက်ကတည်းကလည်း သေမယ်မှန်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမည်းတွေ လွတ်လပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်အတွက် အသေခံသွားကြတာပါပဲ။ အဲဒီ တိုက်ပွဲသတင်းကြောင့် လွှတ်တော်က တစ်နိုင်ငံလုံးက လူမည်းတွေကို တပ်ထဲဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီး ဝင်ရောက်လာသူ လူမည်း ၁၈၀၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကို အနိုင်ရခဲ့ပါတော့တယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အနိုင်အရှုံးပေါ်အောင် တိုက်မယ့် စစ်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်ရင် သေပဲ သေသေ ရှုံးပဲရှုံးရှုံး တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုပါပဲ။ ဒန်ဇယ်ဝါရှင်တန်၊ မော်ဂန်ဖရီးမန်၊ မက်သရူး ဘရိုဒရစ်တို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်။ အားလုံး ခံစားကြည့်နိုင်ပါပြီ။
2017 လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Battleship Island ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားကားလေးကို မှတ်မိလိုက်ကြလား။ အဲ့ဒီအချိန်က ဒီဇာတ်ကားထဲက မင်းသား Song Joong Ki က သူနဲ့အတူတူ Dots လို့အများစုသိကြတဲ့ Descendants of the Sun ရဲ့ မင်းသမီးချော Song Hye Kyo နဲ့ ပူပူနွေးနွေးလက်ထပ်ပြီးကာစပေါ့။ အခုတော့လဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ ကွဲသွားပါပြီ။ ထားပါလေ ရုပ်ရှင်အကြောင်းလေးကိုသွားရအောင်။
ရုပ်ရှင်က ကြည့်လိုက်ရင်သိသွားမှာဆိုတော့ အများစုမသိတဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာလေးတွေကို အရင်ပြောပြမယ်။ ဒီကားက စစချင်းရုံတင်တဲ့ ညပွဲမှာပဲ ကြည့်ရှုသူ ၉၇၀၅၁၆ယောက်တောင် ရှိခဲ့ပြီး အရင်စံချိန်တင်ထားတဲ့ Train to Busan ကိုပါ ကျော်လွန်ပြီးတော့ ဝက်ဝက်ကွဲအောက်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ 2017 July 26 ရက်နေ့မှာထွက်ခဲ့ပြီးတော့ ပထမဆုံးပိတ်ရက်(July 28 ကနေ 30) မှာ လက်မှတ်က 2.5 မီလီယံအထိရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး ၅ ရက်မှာလည်း ၄ မီလီယံအထိကို ခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတော့လဲ မကောင်းစရာကိုမရှိတာပါ။ တကယ်လဲကောင်းခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးမှုတွေရှိမလား အောင်မြင်မှာလားဆိုတာကတော့ ထွက်တာကြာနေပေမဲ့ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းကအသစ်ပဲဆိုတော့ စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုကြိုက်တဲ့ ကိုကိုမမတွေ ခံစားပေးကြပါဦး။ ဒါနဲ့ ကြည့်ပြီးသားသူတွေကလဲ မင်းသားလေးချောလို့ကြည့်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်လေးသဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စောင်ကိုက်ရမဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လဲ အားပေးကြပါဦးလို့ပဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။
၁၉၃၂ခုနှစ်တုန်းက ဘာလင်မြို့မှာ အန်နာဆိုတဲ့
သူမရဲ့ အဖေက နာမည်ကြီးဝေဖန်ရေးဆရာ
အာသာကမ်ပါဖြစ်ပြီးတော့ အမေနာမည်က ဒေါ်ရသီယာပါတဲ့
သူမမှာ မက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ ၁၂နှစ်အရွယ် အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိပြီး
အန်နာတို့တတွေ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ
ကြုံတွေ့ရမလဲ နေရာအသစ် ဘဝအသစ်ကို
ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇာတ်လေးကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ
ဆွန်ဂျာ၀စ်ဂက်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတုန်းက နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ တာဘိုဗန်လို့ ခေါ်တဲ့ နာဇီစစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို မျက်စိကျသွားပြီး သူနဲ့အတူ ညစာစားဖို့ ဖိတ်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆွန်ဂျာဟာ မသွားခဲ့ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဆွန်ဂျာ့ရဲ့ အဖေဖြစ်သူ ထောင်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆွီဒင်အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဟာ ဂျာမန် (နာဇီ) ဘက်က သတင်းတွေရဖို့ ဆွန်ဂျာ့ကို သူလျှိုလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတော့တယ်။ သူလျှိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို သဘောကျတဲ့ တာဘိုဗန်ကိုပါ ချဉ်းကပ်ပြီး အဖေဖြစ်သူ ထောင်ထဲကလွတ်အောင် ကယ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဆွန်ဂျာဟာ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းမှုတွေက ထပ်ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ နာဇီဗိုလ်မှူးကြီး တာဘိုဗန်ဟာ ဆွန်ဂျာ့ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားပြီး ဆွီဒင်ဘက်ကို သူ့အတွက် သူလျှိုသူလုပ်ပေးဖို့ ဆွန်ဂျာ့ကို ပြောလာပါတော့တယ်။
ဆွန်ဂျာတစ်ယောက် နှစ်ဖက်သူလျှိုလုပ်ရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါ။
Harald Rosenlow-Eeg နဲ့ Jan Trygve တို့က ရေးသားထားပြီး Jen Jonsson က ရိုက်ကူးထားပါတယ်
Historical ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ၂၀၁၉ က ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ ဂျိုဆွန်းဟာ တရုတ် မင် အင်ပါယာရဲ့ လက်အောက်ခံ အဖြစ် ရှိနေတုန်းက အချိန်ကို ရိုက်ကူးပြသထားတာပါ..
ဂျန်ယောင်ရှီ ဟာ အရည်ချင်းရှိတဲ့ အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘုရင်နဲ့ နှစ် ၂၀ကြာ
သူငယ်ချင်း သံယောဇဥ် ရှိသူပါ…
လူတန်းစားမခွဲတတ်တဲ့ ဆယ်ဂျုံဘုရင်ကြီးက အစေခံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျန်ယောင်ရှီရဲ့ တီထွင်နိုင်စွမ်းကိုသဘောကျပြီး အမတ်နေရာ ပေးခဲ့ပါတယ်…
အဲ့နောက်မှာ ဂျန်ယောင်ရှီနဲ့ တူတူ တီထွင်မှုမျိုးစုံစတင်ပါတော့တယ်…သူတို့တီထွင်မှုကို မြောင်နိုင်ငံက သိသွားတဲ့အခါမှာတော့…
ကိုးရီးယားရဲ့အထင်ကရမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ Min Sik Choi ကအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်လည်းကောင်းတဲ့အပြင် ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသားကြီးဖြစ်လို့ကြည့်သင့်ပါကြောင်း ညွှန်းဆိုပါရစေ…
တရားမမှုအတွက် တရားခွင်နဲ့ ရာဇဝတ်မှုအတွက် တရားခွင် ဆိုတာပဲရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး တရားခွင်ဆိုတာ မရှိဘူးဗျ။ ဟိ…ဟိ…
နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက် အနေနဲ့ အသုံးချဖို့ တရားခွင်ကို အသုံးချတာလေ။ မကြားဖူးဘူးမလား။ ဘယ်ကြားဖူးမလဲ။ တကယ်မှမရှိတာကိုး။
ဟား…ဟား…. ဆောရီးဗျာ။ နည်းနည်းတော့ရယ်မိတယ်။ အဲဒါနဲ့ နိုင်ငံရေးတရားခွင်ဆိုတာ မရှိဘူးနော်။ ကျွန်တော်ပြောရင် ယုံလိုက်။ ငိငိ xD…
၁၉၆၈ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ ချီကာဂိုမြို့မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်က အစပြုခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲက အားကောင်းနေဆဲကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးမရှိဘဲ အပျက်ပျက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ရတဲ့ စစ်ပွဲကို တားစီးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအာရုံစိုက်နေကြတဲ့ ညီလာခံရှိရာ
ချီကာဂိုမြို့ကို စစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သူတွေကို ဦးဆောင်ပြီး စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ၇ ယောက် ချီကာဂိုမြို့ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရာမှာ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရဲတွေကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားပြီး လူပေါင်းများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ဖို့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့ ၁၉၆၉ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ခေါင်းဆောင် ၇ ယောက်ကို တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။
နေဦး တရားစွဲတယ်လို့ ပြောမိတာလား။ မတရားအဆွဲခံရတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မလား။ အဲဒါကို ဇာတ်ကားကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့။
တကယ်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ တရားခွင်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ အတော်ကို ဟာသမြောက်ပါတယ်။
Chicago7လို့ လူသိများတဲ့ ဒီ ၇ ယောက် စစ်ပွဲကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း ထောင်ခြောက်ဆင်ခံရပြီး
နိုင်ငံရေးကစားပွဲထဲက ထိုးကျွေးခံနယ်ရုပ်လေးတွေ ဖြစ်လာတဲ့ပုံကို လှလှပပလေးပြထားပါတယ်။
ဒီ လူ ၇ ယောက်ထဲက နာမည်ကျော် နိုင်ငံတကာလူငယ်ပါတီ(YIP – Yippy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်)
ခေါင်းဆောင် အက်ဘီ ဟော့ဖ်မန်း ရဲ့ပြက်လုံးတွေကတော့ အဓိကအားဖြည့်ထားတာပေါ့။
သောက်တလွဲတရားသူကြီး ဂျူလိယက် ဟော့ဖ်မန်း(တရားခံ အက်ဘီဟော့ဖ်မန်းနဲ့အမျိုးမတော်ပါ။
ဒီအကြောင်းကို ဇာတ်ကားထဲမှာ သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားပါတယ်။) ရဲ့ ကြောင်တောင်တောင် ဂေါက်တောက်တောက် လုပ်တာတွေက တကယ်ကို မုန်းချင်စရာကောင်းသလို ရယ်လည်းရယ်ချင်စရာကောင်းပါတယ်။
သူတို့ ၇ ယောက် တရားရုံးမှာ မလှုပ်သာမလှည့်သာ အကြပ်ရိုက်နေကြတာကို ထေ့လုံးငေါ့လုံးတွေနဲ့ သရော်ပြထားပြီး အဓိကရုဏ်းဖြစ်တဲ့နေ့က အဖြစ်အပျက်ကို အပြည့်အစုံပြထားပါတယ်။
ဒီတရားခွင်ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းကို သိရင် အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံရေးတရားခွင်ဆိုတာ ရှိလား ဆိုတာ ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ချင်စရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ပိုပြီး ထင်ရှားတာကတော့ သူတို့ ၇ ယောက်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ လူမည်းအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Black Panther ပါတီ
ခေါင်းဆောင် ဘော်ဘီစီးလ် ကိုပါ သူတို့ ၇ ယောက်နဲ့ အတူတရားစွဲခံထားရတာကိုသာကြည့်ပါတော့။
သူတို့တွေက အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို ပြည်နယ်တွေကို ဖြတ်ပြီးသယ်လာရင်း တစ်နိုင်ငံလုံးကို သိလာအောင် မြင်လာအောင် ကြားလာအောင် ပြောပြဖို့ ကြိုးစားရင်းက
ပါးစပ်တွေကို ပိတ်ထားလိုသူတချို့ရဲ့စနက်ကြောင့် ရာဇဝတ်သားတွေဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။
တရားခွင်ကျင်းပနေစဉ်မှာပါ တကယ်ကို ပါးစပ်ကို အဝတ်နဲ့ ဆို့ပြီး မပြောနိုင်အောင် ပါးစပ်ပိတ်ထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီသောက်တလွဲ တရားခွင်က ဘယ်လိုသောက်တလွဲတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကို The Trial of Chicago 7(2020) ကြည့်ပြီး ခွီရင်း ဒီဇာတ်ကားရဲ့ မတ်စေ့(Message) ကြီးကို ယူလိုက်ကြပါကုန်။
“တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေကြတယ်”တဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ ကြွေးကြော်သံပါ။
သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြရုံပါပဲ။
မပြောဘဲ၊ မလုပ်ဘဲနေခဲ့ကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာ အက်မွန် ဘရွတ်ရဲ့ စကားကို ကိုးကားချင်ပါတယ်။
“မကောင်းမှုအောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘာမှမလိုပါဘူး။ လူကောင်းတွေ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရပ်ကြည့်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။
လိုအပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ပြောဖို့လိုပါတယ်။ ပြဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြောတဲ့သူတွေ ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ မြင်မှာပါ။
ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရုံအတွက်တော့ သတ္တိမလိုဘူးပေါ့။
တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ ပြောဖို့လိုနေပြီဆိုတာကို သိပြီး သိတဲ့အတိုင်းပြောခဲ့ကြတဲ့ သူရဲကောင်း ၇ ယောက်ကို ဒီအညွှန်းနဲ့ ဦးညွှတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ဗုဒ္ဓလက်ဝါးသိုင်းဆိုတဲ့ သိုင်းကားကိုမှာ ခေတ်ပေါ်အနေအထားနဲ့
ရိုက်ထားတဲ့ တရုတ်အက်ရှင်ကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကားလေးမှာတော့ သိုင်းကားဆိုပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကျင်လည်နေတဲ့
အပူအအေးခံစားချက်မဲ့ နာမှာမကြောက် သေမှာမကြောက်တဲ့ ညီမအတွက်
အသက်ပေးပြီး ညီမအတွက် ရှင်သန်နေတဲ့ လုံကျန်းပေဆိုတဲ့ လူအကြောင်းကို အဓိက ရိုက်ကူးထားတာပါ။
ဒီလို အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးနေတဲ့အတွက် နတ်မျက်နှာဖုံးစွမ်းအားကို
ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လူအနေနဲ့ စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး ဘုမသိဘမသိ
သိုင်းလောကထဲရောက်သွားခဲ့တယ်။ ညီမကို ကယ်ချင်တဲ့သူ့စိတ်ကို အသုံးချပြီး
တစ်ဆင့်ချင်း သိုင်းကျင့်ပေးသွားတာတွေက အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး
ဒီဘက်ခေတ်ကားဖြစ်လို့ သိုင်းချတာတွေ မမြင်ရတော့ဘူးလို့
အဲ့ဒီခေတ် အဲ့ဒီအခါအကြောင်း စာကြီးပေကြီးတွေမှာလည်း
ငွေဝယ်ကျွန်တွေနဲ့ ကျွန်ပိုင်ရှင် ပဋိပက္ခတွေပါလေ့ရှိပြီး
အကျော်ကြားဆုံးကတော့ “Gone With the Wind ”
” Uncle Tom’s Cabeint” အန်ကယ်တွမ်ရဲ့တဲကလေး..နဲ့
ယခုကားရဲ့ မူလဘူတ ” 12yearsAslave”ဆိုတဲ့ စာအုပ်
စာအုပ်တွေကတော့ ကျွန်တွေဘက်က အမြင်ကို ပြထားပြီး
နှစ်အုပ်လုံးက ထွက်ချိန်မကွာသလို အကြောင်းအရာလည်း
ကတော့ Biography တစ်ပုဒ်ပါတဲ့။
ဒီစာအုပ်တွေမှာ နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့ အမှန်တရားတွေနဲ့
ထိုခေတ်အခါက ငွေဝယ်ကျွန်စနစ်ကို ကျွန်တော်တို့
12 Years As A Slaveစာအုပ်ကို ရိုက်ထားတာပါ။
ဂီတသမားသူ့ အရည်အချင်းကို ပြသရမယ်လို့
လှည့်ဖျားပြီး ဝါရှင်တန်ကို လူလိမ်နှစ်ယောက်က
သူ့ကို လိမ်ခေါ်သွားပြီး ကျွန်ဈေးမှာ ရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။
မိသားစု ဝါသနာ လွတ်လပ်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့
အသုံးချပြီး လွတ်မြောက်အောင် အခါခါကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့
မကွဲပြားကြတဲ့ အရေခွံဝတ်လူတွေကြားက ခွဲခြားမှု…
ဒီအဖြစ်အပျက်က ဒီကမ္ဘာမှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အရက်စက်ဆုံး လူလူချင်း ညှည်းပန်းမှုတွေအောက်မှာ
မရှင်သန်ရပေမဲ့ ရှင်ကျန်ဝံ့စေခဲ့တဲ့ အိမ်ကလေးဆီ
ကိုယ်တိုင်ပဲ ကရုဏာသက်ရင်း ခံစားသက်ဝင်ကြည့်ကြပါ။ဇာတ်ကြောင်းကပဲ ကောင်းတာလားဆိုတော့
Bard Pitt … Micheal Fasssbender
Producerတွေထဲ Brad Pittလည်းပါပါတယ်တဲ့။
Best Motion Picture of Year
Best Performance By Actressနဲ့
Best Writing အစရှိတဲ့ Oscarဆု သုံးခုကို
ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့အပြင် တခြား ၂၃၈ဆုရထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
Hans Zimmerရဲ့ Scoreတွေကိုလည်း နားထောင်ကြရဦးမှာပါ။
ခင်ဗျားတို့ အဖေအမေတွေ အဘိုးအဘွားတွေကတော့ ဒီနာမည်အစား
” လေရူးသုန်သုန် ” ဆိုတဲ့နာမည်ဆိုရင်ပိုပြီးသိကြလိမ့်မယ်ဗျ
အေဗရာဟင်လင်ကွန်းခေတ် ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း
နောက်ဆုံး ဒီဇာတ်လမ်းကို ပိတ်ကားပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါ
အော်စကာဆု ၁၅ဆု အတွက်လျာထားခံရပြီး
ဒီခေတ်အနေနဲ့ ပြန်ကြည့်ရင်တောင် Rotten Tomato မှာ
94% နဲ့ imdb မှာ 8.2ရထားတဲ့ကား
မသေခင်ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကား ၁၀၀၁ကားထဲမှာ
ထိပ်ဆုံး list ကနေပါတဲ့ကား
စပြီးရုံတင်တဲ့အချိန်ကစပြီး ၂၅နှစ်ထိကြာအောင် ဇယားထိပ်မှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စံချိန်ကိုခုထိဘယ်ဇာတ်ကားမှ မချိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ကား
ဒီလိုမျိုး ပြည့်စုံနေတဲ့ကားက ထုံးစံအတိုင်း ကြာချိန်က
၃နာရီ နဲ့ မိနစ်၄၀ နီးပါးကြာတယ်
စကားလက်အိုဟာရာ ရဲ့ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဇာတ်လမ်း
စစ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ လောကဓံအပြောင်းအလဲတွေ
ဒီစိတ်ကြောင့် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲဒုက္ခတွေ
နောက်ဆုံး ကိုယ်အမုန်းဆုံးလူက ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့လူမှန်း သိလာရချိန်မှာလဲ
လောကဓံတရားက ထပ်ပြီး နိုပ်စက်လိုက်ပြန်တဲ့အခါ . . .
အကောင်းဆုံး ဂန္ဓဝင်ဝတ္ထုကြီးကို ဇာတ်လမ်းအချိတ်အဆက်မိမိ နောက်ခံတီးလုံးအကောင်းစားတွေ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အပိုအလိုမရှိ ကိုယ့်ဇာတ်ကောင်ကို
ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီလိုမျိုး အော်စကာဆု ၈ဆုရတဲ့
အကြီးကျယ်ဆုံး ဂန္ဓဝင်ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်လာပါတော့တယ်
“After all, tommorrow is another day! ”
(ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်သူနဲ့ အညွှန်းရေးပေးသူကတော့ Ye Khant Min ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
ထိပ္ဆံုး list ကေနပါတဲ့ကား
“After all, tommorrow is another day!
၁၉၄၁ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ပုလဲဆိပ်ကမ်းကိုဂျပန်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်မူတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့
သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေ့ဖ်နဲ့ဒန်နီဟာ ငယ်စဥ်ကတည်းကအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး
အမေရိကန်လေတပ်ပိုင်းလော့တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ရေ့ဖ်ဟာ အက်ဗလင်း ဆိုတဲ့စစ်သူနာပြုနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးနောက် ဥရောပမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွက်
ချစ်သူအက်ဗလင်းကိုနှုတ်ဆက်ကာ အင်္ဂလန်သို့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ ရေ့ဖ်တစ်ယောက်
ဒီဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာဟာ Transformers ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့
Michael Bay ဖြစ်တာမို့သူ့ရဲ့အက်ရှင်ပေါက်ကွဲမှုလက်ရာတွေကိုဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက်
စစ်ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေ၊ ဒါရိုက်တာ Michael Bay ရဲ့လက်ရာတွေကြိုက်သူတွေအဖို့တော့
ဒီကားမှာတော့ ဟံသာဝတီပြည်ကို ဓားစာခံအနေနဲ့အခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသားလေး နရဲစွမ် ရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။
ကွန်ဖူးမင်းသားကြီး Donnie Yen အဓိကပါဝင်ထားပြီး မင်းသမီးကတော့ Shu Qi ပါ။ ဒီဇာတ်ကြောင်းကို ရှေးကလဲ ဘရုစ်စလီတို့ ဂျက်လီတို့ ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးပါတယ်…။ တိုင်းတပါးရဲ့ နယ်ချဲ့ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ တစ်ချိန်ကတရုတ်ပြည်မှာ Chen Zhen ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့နည်းပေါင်းစုံကနေ ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် တိုင်းတစ်ပါးနယ်ချဲ့တွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာ စစ်ပွဲနောက်ခံဇာတ်ကြောင်းဖြစ်သလို အချစ် အလွမ်း အကြမ်း အရမ်း..ရသစုံတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ IMDb Rating(6.3/10) ရရှိထားပါတယ်။
(အချစ်အတွက် တောင်တစ်လုံးအား တစ်ယောက်ထဲဖြိုခဲ့သူ
သို့မဟုတ်/ ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်လူသား)
ကိုယ့်ချစ်သူ အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်.. စွန့်လွတ်အနစ်နာခံ
တစ်ချို့က ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်အိမ်လေးတစ်လုံး ဆောက်ပေးတာ… တစ်ချို့က ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်
ရွှေငွေရတနာတွေ အပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူ စိတ်ချမ်းသာအောင်ဖန်တီးပေးကြတာ ….. စတဲ့ စတဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့လည်း ပုံဖော်ကြတာပါပဲ။
အချစ်အတွက်နဲ့ တောင်တစ်လုံးအား တစ်ယောက်ထဲဖြိုခဲ့တဲ့သူရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ကပြောရင်…
ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်မှာလား လက်ခံမှာလားး???
လက်ခံလိုက်ပါ မိတ်ဆွေ.. ????
အဲ့လူဟာ တကယ်ကိုပဲ တောင်တစ်လုံးလုံးကို တစ်ယောက်ထဲ ဖြိုခဲ့လို့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာရော …ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာပါ..သူ့ကိုအံသြစွာနဲ့လက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်..
နောက်ဆုံး သူဟာ ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်စံချိန်မှာ အံ့ဖွယ်လူသားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့လူကတော့ တခြားသူ မဟုတ်ပါဘူး။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီယာပြည်နယ်ထဲက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ Dasharth Manjhi ဆိုတဲ့ သူပါပဲ။
အခု ကျွန်တော်ညွှန်းချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ Manjhi အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်ပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးဖို့ ပထမဆုံးအစပျိုးစီစဉ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။
PK, 3Idiots, Doom 3, စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယမင်းသားကြီး Aamir Khan(အမေးရ်ခမ်း) ပါပဲ..။ စီစဉ်ဖြစ်ပုံကလည်း ဒီလိုဗျ…
မင်းသားကြီးက တကယ့်အပြင်က Manjhi ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို သိရှိသွားပြီးနောက်မှာ Manjhiတို့မိသားစု နေထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Manjhi ကလည်း မင်းသား Aamir Khan ဝယ်ပေးတဲ့ အိမ်လေးမှာပဲ နေထိုင်ရင်း ခေါင်းချကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။
>> ရုပ်ရှင်အညွှန်း <<
၁၉၃၄ခုနှစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီယာပြည်နယ်လေးထဲက ဂေလာ (Gehlaur ) ဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာ ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့နွမ်းပါတဲ့ မိသားစုလေးထဲမှာ Manjhiဆိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ဦးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံအရ Manjhiကို (၁၂)နှစ်သားကတည်းက အိမ်ထောင်ပြု (စေ့စပ်) ရမှာဖြစ်လို့ အဲ့ရွာလေးထဲက Faliguni Devi ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ စေ့စပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ အသက်အရွယ်အရ စေ့စပ်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ လက်ထပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်)
အဲ့စေ့စပ်တဲ့နေ့မှာပဲ ရွာလူကြီးက Minjhi အဖေဆီကို အကြွေးလာတောင်းပါတယ်, အကြွေးမပေးနိုင်လို့ ရွာလူကြီးထံမှာ Manjhi ကို အဖေဖြစ်သူကရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ ရွာလူကြီးအိမ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံပီး ဆင်းရဲစွာ ပင်ပန်းစွာနဲ့လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ Manjhi လေးဟာ သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံးး တစ်နေ့မှာ ရွာလူကြီးအိမ်ကနေ ထွက်ပြေးပြီး ကျောက်မီးသွေးတင်တဲ့ ရထားနဲ့ခိုးလိုက်ကာ ဘုံဘေမြို့ပေါ်ကိုတစ်ယောက်တည်း ခြေဆန့်ခဲ့ပါတော့တယ်။
Manjhi ဟာ ဘုံဘေကိုစွန့်ခွာပီး သူ့ရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ရွာလေးကို အပြီးအပိုင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရွာလေး ကတော့ နှစ်တွေကြာသွားလည်း ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ ပိုပြီးတော့တောင် ဆင်းရဲချို့တဲ့လာခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းက ရွာလူကြီးသားရဲ့ နှိပ်စက်မှုကိုအလူးအလဲကို ရွာသူရွာသားတွေဟာ ခံနေရပါတယ်။
ရွာသူမိန်းကလေးတွေကိုလည်း အတင်းအဓမ္မစော်ကားနိုင်ကျင့် ၊ ရွာသားတွေကိုလည်း ကြီးငယ်ရွယ်မရွေး ခေါင်းပုံဖြတ်ပီး အနိုင်ကျင့်နေပါတော့တယ်။
ရဲတိုင်လို့ လည်းမရပါဘူး။ ရွာမှာ ရဲစခန်းလည်းမရှိပါဘူးဗျ။
ဒါဆို တခြားရွာမှာသွားတိုင်လေ.. ဒါမှမဟုတ် မြို့ပေါ်တက်တိုင်ပါလားလို့ တွေးမိကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း.. အဓိက အခက်အခဲကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပါပဲ။
ဒီရွာလေးရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ မြင့်မားလှတဲ့ တောင်ကြီးတွေက ဝန်းရံထားပါတယ်..
ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာလည်း အဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေကိုဖြတ်ပြီး မြို့ကို ရောက်ဖူးတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားပြီး၊ မြို့ပေါ်ကလူတွေကလည်း ဒီတောင်တွေရဲ့နောက်မှာ ရွာသေးသေးလေးတစ်ရွာရှိတယ်လို့ သိတဲ့သူရှားပါးပါတယ်။
ရွာကနေ မြို့ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီတောင်တွေကိုပတ်ပီးမှ သွားရတဲ့ အတွက်ကြောင့် မြို့ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် ၅ရက် ၆ရက်ထိ သွားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေဟာ.ဆင်းရဲချို့တဲ့စွာ ဗဟုသုတကင်းမဲ့စွာနဲ့ ရွာလူကြီးသားရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကို ခံနေကြရပါတယ်.။
အချစ်ကဆန်းကျယ်လွန်းလှပါတယ်။ Manjhi သူ့ရွာလေးကို ပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲ သူငယ်ငယ်က စေ့စပ်ဖူးသူ မိန်းကလေးDevi နဲ့ ပြန်တွေ့ရပါတယ်။ Devi ဟာ အခုဆိုအပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်ပီး တောသဘာဝနဲ့အညီ လှနေပါတယ်..
Manjhi ဟာ Devi ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားပြီး သူသိလိုက်ရတာက Devi ဟာ သူငယ်ငယ်က လက်ထပ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်နေတာပါပဲ..
Manjhi ဟာ အရမ်းကိုပျော်သွားးပီ Deviရဲ့ အဖေဆီကိုသွားကာ ” ဒါကျုပ်မိန်းမ ကျုပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်ထပ်ထားတာ ကျုပ်သူ့ကို လိုချင်တယ်လို့ ” သွားပြောရာမှာတော့ Deviရဲ့ အဖေက Manjhi ကို မောင်းထုတ်ပါတော့တယ်။ Deviရဲ့ အဖေမသိသေးတာက …သူ့သမီး Devi ဟာလည်း Manjhiကို ချစ်မိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ..ဒီတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ.. ဘာကြောင့် တောင်တစ်လုံးကို တစ်ယောက်တည်းဖြိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့..ဇာတ်ကားကိုဆက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျ..
ဒီ ၃နာရီကျော်ကြာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ဒါရိုက်တာကြီး Mohit Moond ကရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပီး ဆုတွေလည်းတသီကြီး ရရှိထားကာ တကယ့်ကို အနှစ်သာရ ပြည့်ဝစွာနဲ့ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Manjhi နေရာမှာ အိန္ဒိယမင်းသားကြီး Nawazuddin Siddiqui က Manjhi ဇာတ်ရုပ်ကိုသဘာဝကျကျ နဲ့ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Deviအဖြစ် မင်းသမီး Radhika Apte ကလည်း တကယ့်ကို ပီပြင်စွာနဲ့ လိုက်ဖက်ညီစွာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မှာ ထူးခြားတာက ဒီကားမှာ သီချင်းတွေ က တာတွေ တစ်ခန်းမှမပါပါဘူး။ နောက်ခံတီးလုံးတောင် များများစားစားမပါပါဘူးး။ ရုပ်ရှင်ကြည့် လိုက်တာနဲ့ သင့်ရှေ့မှာ တကယ်ဖြစ်နေတယ်ထင်ရအောင်ကို သဘာဝကျကျနဲ့ပီပြင်စွာ ရိုက်ကူးထားပါတယ်..။
ဒီနေရာမှာတော့ Full Spoiler Alert ပါ ..
ဒီလိုနဲ့ လူကြီးတွေ သဘောမတူတဲ့အဆုံး Manjhi နဲ့ Deviတို့ဟာ ခိုးပြေးကြပါတယ်…။
အချစ်စစ်တို့ လမ်းဟာမဖြောင့်ဖြူးဘူး ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သူတို့ ရဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းဟာ ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ ခိုးပြေးတဲ့ ညမှာပဲ ရွာလူကြီးသားနဲ့ သူ့တပည့်တွေက နောက်ကနေလိုက်လာလို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးခဲ့ရပါတယ်။
( ရွာသူကြီးသားနဲ့တပည့်တွေလိုက်လာလို့ ထွက်ပြေးတဲ့အခန်း ဗွက်အိုင်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်လုံးနစ်နေရတဲ့အခန်း ) တကယ်ကို ပီပြင်လွန်းလှပီး ချစ်သူ၂ယောက်ရဲ့အတူတူလက်တွဲ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ အချစ်စိတ်ကို ပီပြင်စွာရိုက်ပြထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေဟာလည်း တကယ့်ကို သဘာဝအတိုင်းပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ…။
ဒီလိုနဲ့….အခက်အခဲတွေကို အတူရင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဘဝတစ်ခုဖန်တီးနေလာကြတဲ့ Manjhiတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ သားတစ်ယောက်မွေးပြီး.. Deviက ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့အချိန်……
Manjhi ကလည်း သူ့ရဲ တိုးပွားလာတဲ့မိသားစုဝင်လေးတွေအတွက် တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း မနားမနေ အလုပ်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတာပေါ့….
ဇနီး ဖြစ်သူက ထမင်းခွက်ကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီး ကိုယ်ဝန်မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ ထမင်းပို့ပေးရပါတယ်.။
Manjhi လုပ်တဲ့ လယ်ကွက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမှာ တောင်ကြောတစ်ခုကိုတက်ပြီး ကျော်လွန်ကာမှ Manjhiလုပ်တဲ့ လယ်ကွက်ကိုရောက်တာပါ.. ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ Deviအဖို့ ဒီခရီးဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှပါတယ်.။ သို့ပေမယ့် သူ့ယောကျားဆီကို နေ့တိုင်း ထမင်းထုပ်ရောက်အောင် ပို့ပေးရှာပါတယ်..။
တစ်နေ့..Manjhiရဲ့ နားထဲကို အကုသိုလ်သတင်းဆိုးကြီးဝင်လာပါတော့တယ်..,
ဟုတ်ပါတယ်…….. သူ့မိန်းမ သူ့ကိုထမင်းထုတ်လာပို့ရင် တောင်ပေါ်ကနေခြေလျော်ပီး ပြုတ်ကျလို့ ဆိုတာပါပဲ..။ သူ့မိန်းမဆီ အပြေးအလွှားသွားတဲ့အခါ သွေးအိုင်ထဲမှာ အသက်ငင်နေတဲ့ မိန်းမဖြစ်သူကို Manjhi တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကလည်း ပြုတ်ကျထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့်ပျက်ကျသွားပြီးသွေးအိုင်ထဲက ဇနီးသည်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ ဗိုက်ထဲက သေလားရှင်လားမသိရသေးတဲ့ကလေးငယ်နဲ့.. မြင်ကွင်းက သူ့အတွက်တော့ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေရပါတယ်။ သွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့ သူ့မိန်းမကို ထမ်းပြီး မြို့ဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ပါတယ်..။
ဟုတ်ပါတယ်..Manjhiဟာ သူ့မိန်းမကို ထမ်းပီးတောင်ပေါ်ကနေတက်ပြီး တောင်ကိုဖြတ်ပို့ခဲ့ရတာပါ ????
တောင်ကို ပတ်ပီး သွားရင် ၅ရက်၆ရက်ကြာမှာမို့တောင်ပေါ်လမ်းကနေ သွားခဲ့ရတာပါ.
သူအရမ်းချစ်ရတဲ့ မိန်းမရဲ့ အသက်ကို သူမကယ်နိုင်လိုက်ပါဘူးး ????
ရွာပြန်ရောက်တော့ Manjhi အကြီးအကျယ်ကိုဒေါသမီးတွေ ရင်ထဲမှာတောက်လောင်နေပါတယ်..။
အကြောင်းကား… သူ့မိန်းမသေရတာ ဒီတောင်ကြောင့်လို့ Manjhi စိတ်ထဲမှာ စွဲနေပါတယ်၊
ဒီလိုနဲ့ သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာကတော့ ဒီတောင်ကို ဖြိုပြီး လမ်းဖောက်ဖို့ပါပဲ..။ သူ့လို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနောက်လူတွေ မကြုံအောင် ဖောက်မယ်ဆိုပြီး ပေါက်တူးတစ်လက် ပေါက်ဆိန်တစ်လက်နဲ့ နေ့တိုင်း တောင်ကိုသွားပီး ဖြိုပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ရွာသားတွေကြားတော့ Manjhiကို မိန်းမသေသွားလို့ဒီကောင်ရူးသွားပြီလို့ ပြောပီး ဝိုင်းဝန်းလှောင်ပြောင်ကြပါတယ် ။ ကြာရင် ဒီကောင်မောပြီး ရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Manjhi ဟာ မရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ နေ့တိုင်း မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ပေါက်ဆိန်ထမ်းပီး တောင်ကိုတစ်ယောက်ထဲ ဖြိုနေတော့တာပါပဲ……။
နောက်ဆုံးတော့ Manjhi ဟာ (၂၁)နှစ်ကြာတဲ့အထိ တောင်ကို တစ်ယောက်ထဲနဲ့ ဖြိုခဲ့ပီး လမ်းဖောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်… သူတောင်ကိုဖြိုခဲ့တဲ့ အချိန်ဟာ(၂၁)နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပါတယ်..။
(၂၁)နှစ်လုံးလုံး သူတစ်ယောက်ထဲ တောင်ကို ဖြိုခဲ့တာပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ သူအကူအညီ မတောင်းခဲ့ပါဘူး။
ကဲ… Manjhi တစ်ယောက် ကလေး၂ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုတွေ ဒုက္ခခံပြီး ဒီတောင်ကိုဖြိုခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး ခံစားကြည့်ရှုကြပါတော့..မိတ်ဆွေ။
ဂျာယောင်းဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဂျိုဆွန်းရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး အဖြစ်ရွေးကောက်ခံရပါတယ်
သူမ မိဖုရားဖြစ်လာမှာ မလိုလားသူတွေဟာ လုပ်ကြံသူ မူမြောင်းကို ငှားရမ်းပြီး သူမကို လုပ်ကြံခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် မူမြောင်းဟာ အရင်တည်းက ဂျာယောင်းနဲ့ သိကျွမ်းခဲ့ပြီး ဂျာယောင်းကို တဖတ်သတ်ချစ်နေတဲ့သူဖြစ်လို့ လုပ်ကြံရမယ့်အစား ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်
ဂျာယောင်းမိဖုရားကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ အခါမှာလည်း နန်းစောင့်တပ်သားဝင်လုပ်ပြီး ဆက်တိုက်ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့နောက်…
ထီးနန်းရဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ
သူချစ်တဲ့ မိဖုရားကြီးကို ဆက်လက်ကာကွယ်နိုင်မလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဆ်လက်ကြည့်ရှုကြပါနော်…။
*** 18+ ဇာတ်ဝင်ခန်းများပါဝင်တဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ တူတူကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး **
ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာရဲ့ ကြိုးဆွဲရာကရတာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ အနှစ်သာရဟာ ဇာတ်ညွှန်းဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးချွေးတွေရင်းနှီးပြီး ဖြစ်တည်လာရတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အပြင်မှာလည်း တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ Herman J Mankiewicz ဆိုတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဆရာတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဂန္တဝင်မြောက်လက်ရာဖြစ်တဲ့ Citizen Kane ကိုရေးသားတဲ့အကြောင်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ။
ဒီ Citizen Kane ဟာဆိုရင် သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် ကျောင်းသုံးစာအုပ်အနေနဲ့တောင် ပြန်သင်ရတဲ့အထိ ဂန္တဝင်တွင်ခဲ့တာပါ မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး ခြေထောက်ကျိုးသွားတဲ့ မန့်ခ်ကို အော်ဆန်ကမြို့တစ်မြို့မှာ လျှို့ဝှက်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးရေးသားစေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးဖို့ ရက် ၉၀ ပေးထားပေမယ့် အလောကြီးတဲ့အော်ဆန်ကတော့ ရက် ၆၀ အတွင်း အပြီးသတ်ဖို့ပြောပါတယ်။
တစ်ချိန်က ထုတ်လုပ်သူတိုင်းရဲ့အပယ်ခံမန့်ခ်ဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့နေရာမှာ သူမတူတဲ့ပါရမီရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ ရှိတ်စပီးယားလို့တောင် တင်စားခံနေရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ရှိတ်စပီးယားလိုပဲ ဉာဏ်ကွန့်ရတာကိုသဘောကျတဲ့ စာရေးဆရာမန့်ခ်တစ်ယောက် အချိန် သုံးပုံတစ်ပုံတစ်ပုံလျော့သွားတဲ့ ရက် ၆၀ အတွင်း ပြီးစီးအောင် ရေးနိုင်ပါ့မလား။ သူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အပယ်ခံဘဝအချိန်တွေကိုရော ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲ။
နာမည်ကျော်ဇာတ်ညွှန်းဆရာဟဲရက်စ်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးနောက် သူ့ဘဝမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ Imdb 7.9 အထိရရှိထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးမှာ ၁၉၃၀ ခုနှစ်က ဟောလိဝုဒ်အကြောင်းကို တစေ့တစောင်းရိုက်ပြထားတဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို သိချင်သူတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ရပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ 2PM က Lee Joon-Ho ကို playboy အဖြစ်နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ Mischievous Kiss က
မမ Jung So-Min ကလည်း အဓိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
ဟောဆဲ့က ကချေသည်မိခင်က မွေးဖွားလာတဲ့ မျိုးရိုးနိမ့်တစ်ယောက်ပါ
မိခင်ဆုံးပါးပြီးနောက် ကချေသည်အိမ်မှာပဲ ကချေသည်တွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်
ကချေသည်တွေကသာ သူ့ရဲ့ မိသားစုဖြစ်လာခဲ့တယ်
တစ်ရက်မှာ ကချေသည်အိမ် အကြွေးနဲ့ သိမ်းခံရမယ့် အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်
ဟောဆဲ့လည်း မနေသာတော့ပဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဝင်ငွေကူရှာတဲ့အခါမှာတော့
ယောက်ျား ကချေသည်အဖြစ်နဲ့ မိန်းမတွေကို ဖျော်ဖြေရသူဖြစ်လာတယ်
တကယ်က သူ့မှာ အရမ်းချစ်တဲ့ မိန်းကလေးရှိတယ်
သူ့ရဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ သူချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ နီးစပ်နိုင်ပါ့မလား
သူတို့ရဲ့ အချစ်ကို ဘယ်လို ပုံဖော်ပြမလဲဆိုတာ ဒီဇတ်ကားလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါနော်
Cold Mountain(2003) ဒီတစျခေါကျတော့ CM ပရိသတျကွီးအတှကျ Old but Gold အနနေဲ့ အရမျးကောငျးတဲ့ ကားဟောငျးလေးတစျကားကိုတငျဆကျပေးခငြျပါတယျ။နာမညျကြောျသရုပျဆောငျ Jude Lewနဲ့ Nicole Kidman တို့ပါ၀ငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ Cold Mountain ဆိုတဲ့ ဒီကားလေးဟာ Imdb Rating 7.2/10 Rotten Tomatoes 71% တောငျရရှိထားတဲ့ကားလေးပါ။ ဇာတျကားလေးကတော့ ကိုး‌မောငျတိနျလို့ ခေါျတဲ့မွို့လေးကနေ အခွတေညျထားတာပါ။ကြှနျစနစျဖကြျသိမျးရေးပေါျ အငွငျးပှားပွီးမွောကျပိုငျးနဲ့တောငျပိုငျး ပွညျတှငျးစစျအတှကျ တိုကျခိုကျဖို့မွို့ထဲမှာရှိတဲ့ ယောကြာျးသားတှေ အရမျးစိတျအားတကျကွှနတေဲ့အခြိနျလေးပေါ့။အဲဒီကိုးမောငျတိနျမွို့လေးကို ဘုနျးတောျကွီးတစျပါးနဲ့သူ့သမီးလေးဖွစျသူ အဒေါက ပွောငျးလာခဲ့ပါတယျ။ပွောငျးလာပွီးသိပျမကွာခငျမှာပဲ စစျပှဲတှကေ စတငျကာအငျးမနျးတို့ စစျတိုကျထှကျရပါတော့တယျ။အငျးမနျးနဲ့ အဒေါတို့မှာအတူတူရှိခြိနျနညျးပါးခဲ့ပမေယျ့ ကြှနျမစောငျ့နမေယျဆိုတဲ့ ကတိလေးကတစျဘဝလုံးစာအတှကျလုံလောကျသှားခဲ့သလိုပါပဲ။အဒေါကအခကျအခဲတှကွေားက အငျးမနျးပွနျအလာကိုစောငျ့နခေဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ စစျပှဲကထငျသလိုဖွစျမလာခဲ့ပဲ နှစျမြားစှာကွာလာခဲ့ပါပွီ။စစျပှဲကနေ ထှကျပွေးတဲ့သူတှကေိုလညျး မွို့စောငျ့တပျတှကေ ခှေးတစျကောငျလို သတျဖွတျပစျနတေဲ့အခြိနျဖွစျလာပါတယျ။ခစြျရတဲ့သူတစျယောကျတညျး စောငျ့မြှောျနတောကိုသိနရေတဲ့ အငျးမနျးတစျယောကျ ဘယျလိုဆကျလုပျမလဲ? မိုငျပေါငျးထောငျခြီ‌ဝေးကှာနတေဲ့ ကိုးမောငျတိနျကိုပွနျရောကျနိုငျမှာလားဆိုတာ စိတျဝငျတစားကွညျ့ရှုရမှာပါ။လှမျးမောဖှယျ ခစြျခွငျးမတေ်တာနဲ့ စစျအတှငျးအခွအေနတှေကေို သခြောလေးရိုကျပွထားနိုငျလို့ ဒီကားလေးက အရမျးကိုကောငျးတဲ့ကားတစျကားဖွစျလာရတာပါ။CM ပရိသတျကွီးလညျး ထပျတူကွညျ့ရှုခံစားနိုငျဖို့ တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။Cold Mountain (2003)ပါ။
ရုရှားဇာဘုရင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်နေ ပိုလန်နိုင်ငံကြီးကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ပိုလန်စစ်သည်တွေရဲ့
ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့ တစ်ကယ့်သမိုင်းကြောင်းကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။ အင်အားသုံးဆ
လောက်ကွာတဲ့ မားသားရုရှားစစ်တပ်ကြီးကို ပိုလန်စစ်သည်တော်တွေရဲ့ရွပ်ရွပ်ချွံချွံရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံတွေ၊
စစ်ပွဲအတွင်းကချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ၊ အသုံးချခံ FAလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နာစရာ
အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပိုလန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဆုနှစ်ဆုရခဲ့တဲ့ ဒီသမိုင်းကြောင်း
နောက်ခံဇာတ်လမ်းလေးကို ခံစားကြည့်ရှု အကဲဖြတ်လိုက်ကြရအောင်လား…….
ဇာတ်ကားကြာချိန် ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်ထိရှိတာကြောင့် တဝကြီးလည်း ကြည့်ရှုခံစားရစေမှာပါ။
ဒီနေ့အတွက် အမိုက်စား Action , Drama, History ကားလေးကိုတင်ပေးချင်ပါတယ်။
မွန်ဂိုတွေ အင်အားကောင်းချိန် ၁၂၀၀ ကျော်ခုနှစ်ကာလကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။
ဉရောပ – အာရှနယ်စပ် ယူကရိန်း အမေရိကန်နယ်မြေ၊ ကပ်သရီသန်တောင်းတန်းဒေသမှာ
အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်တဲ့ ယူက‌ရေးနီးယမ်းလူမျိုးတွေဟာ တောင်ယာလုပ် အမဲလိုက်တဲ့
လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူမျိုးတွေရဲ့နယ်‌မြေကို ဂျင်ဂျစ်ခန်ရဲ့ မွန်ဂိုတပ်တွေ ကျူးကျော်တိုက်
ခိုက်လာတဲ့အခါ…. မိမိနယ်မြေကို ဘယ်လိုခုခံကာကွယ်သွားမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ။ သမိုင်း
စိတ်ကူးယဉ်၀တ္ထုကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် သမိုင်းကြောင်းတစ်ခု
ကိုပြန်လည် မြင်ယောင်ထင်မှတ်စေလောက်အောင်ကောင်းမွန်တာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကာမီလော့ရဲတိုက်ရဲ့ ပိုင်ရှင် ဘုရင်အာသာဟာ မိုဒတ်ဆိုတဲ့သားတော်ကိုဖွားမြင်ပြီး မိဖုရားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်
ဒါနဲ့ တောနက်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဂွန်နဗီးဆိုတဲ့မိန်းမပျိုလေးနဲ့ လက်ဆက်ပြီး ဂွန်နဗီး ဘုရင်မဖြစ်လာခဲ့တယ်
ဘုရင်အာသာဟာ စစ်ပွဲမှာပျော်ရွှင်တဲ့အတွက် ရောမမှာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ စစ်တိုက်ပြီး
တွေ့ရာအမျိုးသမီးနဲ့ပျော်ပါး ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကာမီလော့ ရဲတိုက်ကိုမေ့နေခဲ့တယ်
ဒီအချိန်မိုဒတ်အရွယ်ရောက်လာတော့ ဖခင်ရဲ့ရာဇပုလ္လင်ကိုလုယူဖို့ အကြံအစည်တွေထုတ်ပြီး မိထွေးဖြစ်တဲ့ ဂွန်နဗီးကို မိဖုရားထပ်မြောက်ပြီး ကာမီလော့ရဲ့အရှင်သခင်လုပ်ဖို့ စွမ်းဆောင်တော့တယ်
ဒီတော့မှ အာသာလဲ မာလင်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ ကာမီလော့ဆီအပြေးပြန်ပြီး
သူ့ရဲ့သားတော်လက်ထဲက ကာမီလော့ရဲတိုက်နဲ့ ဂွန်နဗီးကို ပြန်လည်ရယူပုံကို
၂၀၁၉ ခုနစ်ထွက် Historical/ Political ဇာတ်ကာဒချစ်သူတွေအတွက် A Must Watch ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်….
ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံး ထပ်တူကျနေရင် ဒါဟာပျော်ရွှင်မှုပဲ အားနည်းတဲ့သူတွေဟာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြဘူး ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ
သန်မာတဲ့လူတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မဟတ္တမဂန်ဒီက မိန့်ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်သမား မေတ္တာရှင်ကြီး မဟတ္တမဟာ ၁၉၄၈ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ နယူးဒေလီမှာ လုပ်ကြံ
သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဂန္ဒီရဲ့အမြင်ကိုရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိသုံးယောက်ရဲ့
အမြင်ကို ဝိရောဓိဆန်ဆန် မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ကြောင်း သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
အခြေတည်ထားတာက ဂန္ဒီလုပ်ကြံမခံရမီ အိန္ဒိနိုင်ငံ ပူပူနွေးနွေး လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစ ကာလမှာဖြစ်ပါတယ်…
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာတော့မှာ ကျိန်းသေသလောက်ဖြစ်နေပြီး အမျိုးဘာသာဂိုဏ်းကွဲ အစွန်းရောက်တွေကြောင့် နိုင်ငံဟာ
ပါကစ္စတန်က ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ ကို ပယ်ချခံရတဲ့ကိစ္စအတွက် ဂန္ဒီဟာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် ဟိန္ဒူပါတီဝင်တွေက
အဲဒါကို ဘုံဘေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ဒီစီပီဂျင်မီနဲ့ ဒီအိုင်ဂျီရေနာတို့က ကြိုတင်သတင်းရထားခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုက ဘာဖြစ်မလဲ
ဆိုတာကို… ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်လွှမ်းမိုးမှုတွေ ကင်းစင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုစတေးမှုတွေ အနစ်နာခံမှုတွေ
ဒီကားကတော့ အိန္ဒိယရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီးကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့Mohandas Karamchand Gandhi
ဒီဇာတ်ကားမှာ British တွေအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကျရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး
ဒီကားလေးကတော့ Box office worldwideမှာ $10600000အထိဝင်ငွေစံချိန်တင်ရရှိထားတဲ့
Nov27 2020မှာထွက်လာတဲ့ Drama History အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်
1975ခုနစ် တီဗီတွေမရှိသေးချိန်ဖလင်နဲ့ ပိတ်ကားပေါဇာတ်ကားပြလေ့ရှိပါတယ်..
ွဒီအချိန်မှာ ဇာတ်ကားမပြသခင်လာတဲ့ သတင်းအတိုအထွာမှာ၂၂ရက်နေ့ ပါလာတဲ့
သမီးလေးပါတဲ့ one secondစာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရဖို့
ဖလင်လိပ်တွေလမ်းမှာပျက်ဆီးသွားလို့ အလုပ်မပြုတ်ဖို့ အရေး ကြိုးစားရတဲ့
ဖလင်လိပ်တစ်လိပ်ပဲရှိချိန် ဖလင်ဆေးရည်လဲမရှိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားပြီးပြန်ရယူမလဲ…
ဘဝမှာ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အစအစအရာရာ ပြင်ဆင်ကြရပ